YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, July 16
ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခံရသည့် အန်အယ်လ်ဒီပါတီဝင်များကို ရုံးထုတ်စွဲချက်တင်
ပီတာအောင်/ ၁၆ ဇူလိုင် ၂၀၀၈
ပြီးခဲ့သည့် ဇွန် (၁၉) ရက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့က စွမ်းအားရှင်နှင့်ကြံ့ဖွံ့တို့၏ ရိုက်နှက် ဖမ်းဆီးခံရသည့် အန်အယ်လ်ဒီပါတီဝင်များကို ရန်ကုန်မြို့ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ စုပေါင်း တရားရုံး၌ ဆူပူအုံကြွမှုတို့ဖြင့် ယနေ့ရုံးထုတ် တရားစွဲဆိုကြောင်း တရားခွင်သို့ သွားရောက်ခဲ့သူ တဦးက ပြောသည်။
တရားစွဲခံရသည့် တွံတေးမြို့ အန်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ဝင် ဦးချစ်ခင်၏ သားဖြစ်သူ ကိုအောင်စိုးမင်းက “ဒီနေ့ ရုံးထုတ်တယ်၊ နှစ်ကြိမ်ရှိပြီလို့ကြားတယ်။ ခုတကြိမ်မှ တွေ့ခွင့်ရတာပေါ့။ သူတို့ကို (၁၂) နာရီ လောက်မှာ အင်းစိန်ထောင်က ခေါ်လာတယ်။ တခါတည်း ရုံးကိုတင်တယ်။ (၂) ယောက်တွဲ၊ (၂) ယောက်တွဲ လက်ထိပ်တွေ ခတ်ပြီး ခေါ်လာတယ်။ စကားပြောခွင့်ရတယ်။ ရုံးမှာ ချက်ချင်းစစ်ဆေး ပြီး ချက်ချင်းပြန်ခေါ်သွားတယ်” ဟု ပြောသည်။
ဖမ်းဆီးခံရသူများမှာ ဦးပဉ္စင်း ဦးစန္ဒိမာ၊ ရှေ့နေ ဦးရောဘတ်စန်းအောင်နှင့် အန်အယ်လ်ဒီပါတီဝင်
(၁၂) ဦးတို့ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို ၅၀၅ (ခ)၊ ပုဒ်မ (၁၄၃) တို့ဖြင့် တရားစွဲထားသည်ဟု သိရသည်။
ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) သည် အစိုးရနှင့် နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုကို ထိခိုက်စေသည့် ပြစ်မှုဖြစ်ပြီး (၂) နှစ်ခန့် ပြစ်ဒဏ်ချနိုင်ကြောင်းနှင့် ပုဒ်မ (၁၄၃) သည် လူ (၅) ဦးထက်ပို၍ စုရုံးသည့် ပြစ်မှုဖြစ်ပြီး (၆) လခန့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်သည်ဟု ဗဟိုတရားရုံးချုပ်ရှေ့နေ ဦးအောင်သိန်းက ပြောသည်။
အန်အယ်လ်ဒီ ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာဝင်းနိုင်က “ရိုက်နှက်ခံရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ထပ်ပြီးတော့ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတာ ဒါတွေဟာ ဥပဒေပြင်ပက လုပ်ရပ်တွေပါ။ ဒီရိုက် နှက်ခံရတဲ့လူတွေက တရားစွဲပိုင်ခွင့်တို့ ဥပဒေကြောင်းအရ အရေးယူပိုင်ခွင့်တွေ ဘာမှ အခွင့်အရေး တွေ ကျနော်တို့မှာ မရဘူး” ဟုပြောသည်။
ဖမ်းဆီးတရားစွဲခံရသူများအတွက် အမှုရင်ဆိုင်ရန် အန်အယ်လ်ဒီက စီစဉ်ထားကြောင်းနှင့် လာမည့် (၂၅) ရက်၌ ထပ်မံ ရုံးထုတ်ရန်ရှိကြောင်း သိရသည်။
အဖမ်းခံရသူ (၁၄) ဦးတို့မှာ ဦးစန္ဒိမာ၊ ရှေ့နေ ရောဘတ်စန်းအောင်၊ အန်အယ်ဒီပါတီဝင် ဦးထွန်းမြင့် (ဗဟန်း)၊ ဦးစိုးအုန်း (ဗဟန်း)၊ ဦးကျော်ကျော်သန်း (ညောင်လေးပင်)၊ ဦးသိန်းဝင်း (တာမွေဒု-ဥက္ကဋ္ဌ)၊ ဦးမောင်မောင်သိမ်း (မင်္ဂလာဒုံ)၊ ဦးဌေးအောင် (မရမ်းကုန်း)၊ ဦးမြင့်ဆွေ (ကြည့်မြင်တိုင်)၊ ဦးတင်အုန်း (ရွှေပြည်သာ)၊ ဦးမောင်စိန် (လှိုင်)၊ ဦးဟန်စိန် (အင်းစိန်)၊ ဦးချစ်ခင် (တွံတေး)၊ ဦးစံဘော် (တွံတေး) တို့ဖြစ်သည်။ ။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 16 2008 15:05 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ စစ်အစိုးရနှင့် အတိုက်အခံများအကြား ဆွေးနွေးပွဲများ ပြန်လည်စတင်နိုင်ရန် သြဂုတ် လလယ်ပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်ပါရန် မြန်မာစစ်အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလအထူးသံတမန် မစ္စတာ အီဗရာဟင် ဂမ်ဘာရီကို ဖိတ်ကြားခဲ့သည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက အင်္ဂါနေ့တွင် ထုတ်ဖေါ် ပြောဆိုလိုက်သည်။
နောက်လတွင် တိုင်းပြည်သို့ လာရောက်ပါရန် ဖိတ်ကြားချက်ကို မြန်မာစစ်အစိုးရက ပေးပို့ခဲ့သည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အမျိုးသမီး Marie Okabe က အင်္ဂါနေ့တွင် ထုတ်ဖေါ် ပြောဆိုသွားခြင်း ဖြစ်သည်။
မူလက မေလအတွင်း လာရောက်ရန် ဖြစ်သော်လည်း လူပေါင်း ၁၃၈ဝဝဝ ဦး သေဆုံးေ ပျာက်ဆုံးခဲ့ရသည့် မေလ ၂ ရက်နှင့် ၃ ရက်နေ့က တိုက်ခတ်ခဲ့သည့် နာဂစ် ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကြောင့် စစ်အစိုးရက ရက်ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့သည်။
၂ဝဝ၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေသူများအား ရက်စက်စွာ နှိမ်နင်းခဲ့ပြီးနောက် ဤ နိုင်ဂျီးရီးယားလူမျိုး သံတမန်ကြီးသည် အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံသို့ ၃ ကြိမ် လာရောက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
ဂမ်ဘာရီ၏ ခရီးစဉ်သည် စစ်အစိုးရနှင့် အထိန်းသိမ်းခံ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်စားပြုသည့် အတိုက်အခံများအကြား ဆွေးနွေးပွဲတရပ် ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂက ကြိုးပန်းနေမှု၏ အစိတ်အပိုင်း တရပ်ဖြစ်သည်။
ယခင် ကုလအထူးသံတမန်ဟောင်း မစ္စတာ ရာဇာလီ အစ္စမေးလ်ထံမှ တာဝန်များကို လွှဲပြောင်းရယူခဲ့သည့် မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီသည် စစ်အစိုးရ၏ ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြား ဆွေးနွေးပွဲများ ပေါ်ပေါက်လာစေရန် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဤဆွေးနွေးပွဲများမှ မည်သည့် အလုပ် ဖြစ်နိုင်လောက်သည့် ရလဒ်မှ ထွက်ပေါ်ခဲ့ခြင်းမရှိဟု ဝေဖန်သူများက ပြောဆိုကြသည်။
ဤသို့ ကုလသမဂ္ဂ၏ ကြိုးပန်းမှုများ ရှိနေလင့်ကစား စစ်အစိုးရသည် ယင်း၏ အစီအစဉ်များကို ပြောင်းလဲခြင်း မရှိဘဲ တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အတိုက်အခံအုပ်စုများ ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း မရှိသည့် ယင်းတို့၏ အဆင့် ၇ ဆင့်ပါ လမ်းပြမြေပုံအတိုင်း ဆက်လက် လျှောက်လှမ်းနေသည်။
ကုလသမဂ္ဂကမူ အတိုက်အခံများနှင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ ပါဝင်ခွင့်ပြုသည့် လမ်းပြမြေပုံ တရပ်ကို တိုးချဲ့ကျင့်သုံးပါရန် မြန်မာစစ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်သူများကို တိုက်တွန်း ပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော် ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း၏ ဖိအားများကို ဂရုမစိုက် မသိသလိုပြုကာ စစ်အစိုးရနှင့် သူတို့ စိတ်ကြိုက် ခေါင်းခေါက် ရွေးချယ်ထားသည့် ကိုယ်စားလှယ်များသာ ပါဝင်ရေးဆွဲထားသည့် ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေ မူကြမ်းကို မေလအတွင်းတွင် ဆန္ဒခံယူပွဲတရပ် ကျင်းပ၍ အတည်ပြုခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်တွင် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတရပ် ကျင်းပ၍ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အစိုးရတရပ်ကို ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်သွားမည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။
အတိုက်အခံ အုပ်စုများနှင့် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များက စစ်အစိုးရ၏ အစီအစဉ်ကို သဘောမတူဘဲ စစ်အစိုးရ၏ လမ်းပြမြေပုံနှင့် ဆန္ဒခံယူပွဲ၏ တရားဝင်မှုကို အသိအမှတ် မပြုဘဲ ပယ်ချပါရန် ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းကို တောင်းဆိုထားသည်။
မစ္စတာ ဂန်ဘာရီ သြဂုတ်လတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားမည်
ဧရာဝတီ ဇူလိုင် ၁၆၊ ၂၀၀၈
မြန်မာစစ်အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာအီဘရာဟင် ဂန်ဘာရီအား လာမည့် သြဂုတ်လလယ်ပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက် လည်ပတ်နိုင်ကြောင်း ဖိတ်ခေါ်စာပို့သည်ဟု ကုလသမဂ္ဂက ပြောသည်။
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေမှ တဆင့် ကုလ သမဂ္ဂရုံးသို့ ဖိတ်ခေါ် စာပို့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း နယူးယောက်မြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂရုံး ချုပ်မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောသည်။
မစ္စတာ ဂန်ဘာရီ၏ ခရီးစဉ်အတွင်း၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ တို့ နှင့်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှု များပြုလုပ်နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ထားကြောင်းလည်း ၎င်းကဆိုသည်။
ယင်းခရီးစဉ်အတွက် သွားရောက်မည့်ရက်ကို မသတ်မှတ်ရသေးကြောင်းလည်း သိရသည်။
မစ္စတာ ဂန်ဘာရီ၏ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်တွင် ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး အပါအ၀င် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများလွတ် မြောက်ရေးတို့ ပါဝင်မည်ဖြစ် သည်ဟုလည်းသိရသည်။
မစ္စတာ ဂန်ဘာရီ၏ ယခုခရီးစဉ်သည် ပြီးခဲ့သည့် မေလအတွင်းကပင် သွားရောက်ရန်ဖြစ်ပြီး စစ်အစိုးရက နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်း တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် နိုင်ငံနှင့် တ၀န်း ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းများနှင့် အလုပ်များနေမှုကြောင့် ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကုလ သမဂ္ဂက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
မစ္စတာ ဂန်ဘာရီသည် ယခုနှစ် မတ်လ ၆ ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံသို့ နောက်ဆုံးအကြိမ် ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ် အတွင်း ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသို့၂ ကြိမ်လာရောက်၍ စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်များ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် အန်အယ်လ်ဒီ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ယင်း ခရီးစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းက တိုးတက်မှုနည်းပါး၍ စိုးရိမ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ဖူးသည်။
ဇိုမီးအမျိုးသား ကွန်ဂရက်စ် ဥက္ကဠ ပုကျင်းရှင်ထန့်ကတော့ မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီရဲ့ ခရီစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ့ရဲ့ သဘောထားကို အခုလိုပြောပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မြန်မာ့အရေး အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် မစ္စတာ အီဗရာဟင်မ် ဂမ်ဘာရီကို မြန်မာစစ်အစိုးရကနောက်လမှာ လာခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အပေါ် စင်္ကာပူနိုင်ငံက ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ စစ်အစိုးရအဆင့်မြင့်တာဝန်ရှိသူတွေအပါအ၀င် တခြားလူတွေနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်ရေး အပြည့်အ၀ခွင့်ပြုဖို့လည်း စင်္ကာပူနိုင်ငံခြားရေးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက မြန်မာအစိုးရကို တိုက် တွန်းလိုက်ပါတယ်။
မစ္စတာဂမ်ဘာရီရဲ့ခရီးစဉ်နဲ့ သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် အရေးကြီးတယ်လို့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောခဲ့သလို ဒီခရီးစဉ်ပေါ် စင်္ကာပူကထောက်ခံကြောင်းလည်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံး ကုန်သွယ်ဘက်နိုင်ငံတခုဖြစ်သလို မြန်မာနိုင်ငံ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်နေတဲ့ ASEAN အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့ရဲ့ လက်ရှိ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန် ယူထားတဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။
မစ္စတာဂမ်ဘာရီ သြဂုတ်လလယ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသွားမယ်ဆိုတာကို အင်္ဂါနေ့မှာ ကုလသမဂ္ဂက ကြေညာခဲ့တာပါ။ ရက်အတိအကျ အပါအ၀င် အစီအစဉ်နဲ့ ရည်ရွယ်ချက် အသေးစိတ်တွေကိုတော့ မသတ်မှတ်ရသေးပါဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ရန် ပြီးခဲ့သည့် မေလကတည်းက မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီက စစ်အစိုးရထံ တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၌ နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်း သဘာဝဘေး ရင်ဆိုင်နေရသဖြင့် ယခုမှ လာခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ မစ္စတာဂမ်ဘာရီ အလာကောင်းသော်လည်း အခါနှောင်းပြီဟု အတိုက်အခံဘက်က မြင်သည်။
အထူးသဖြင့် မစ္စတာဂမ်ဘာရီနှင့် တချိန်က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ရာဇာလီတို့၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်ပြီး နားလည်မှု ရှုတ်ထွေးခဲ့သည့် သာဓကရှိသည်။ မစ္စတာရာဇာလီကို ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလ (၄) ရက်နေ့၌ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးသံတမန်အဖြစ် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်မှ ခန့်အပ်စဉ်က မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံတွင် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီ (၂၉) ရက်၌ ချမှတ်ခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် အမှတ် (၅၄/၁၈၆) ကို အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရန်ဆိုပြီး တာဝန်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မင်းဇင် ဇူလိုင် ၁၆၊ ၂၀၀၈
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပဋိပက္ခက ရေရှည်ပြီး၊ ဖြေရှင်း၍ ပြေလည်နိုင်ဖွယ် မရှိသည့် နောက်ထပ်အဆင့်တခုသို့ တက်လှမ်းတော့မည် ဖြစ်သည်။ တနည်းဆိုရသော် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပဋိပက္ခက စုဖွဲ့စည်းထားသည့် အခြားပုံစံတမျိုးသို့ ပြောင်းလဲ သွားတော့မည် ဖြစ်သည်။
စစ်အစိုးရက "လမ်းပြမြေပုံ" အဆင့် (၇) ခု၏ တခန်း တကဏ္ဍအနေဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို အတည်ပြုခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပရန် ဆက်လက်ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြင့် ကစားပွဲအသစ်အတွက် စည်းမျဉ်းဥပဒေသများကို တဖက်သတ်ချမှတ်နေပြီ ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ယခုဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေက မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အထူးလိုအပ်နေ သည့် နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အခိုင်အမာ အချက်အလက်များ ပါဝင်လှသည် မဟုတ် ပါ။ နိုင်ငံရေးပါတီ၊ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးက အတူတကွ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းကြ၍ သူတို့၏ ထင်မြင်ယုံကြည်ချက်များကို ဖလှယ် ညှိနှိုင်းနိုင်ကြရန် အခွင့်အလမ်းလည်း ဖြစ်ပေါ်လာဖွယ် မရှိပါ။
ဤသို့ နိုင်ငံတော်ပြုပြင်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများကို သွားမည့်အစား၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဦးတည်ချက်က တလွဲဖြစ်နေခဲ့ သည်။ မြန်မာနိုင်ငံက "နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒဆိုင်ရာ မဂ္ဂဇင်း" (Foreign Policy magazine) နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေ အဖွဲ့တို့၏ တင်ပြခဲ့သည့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် "ကျရှုံးနိုင်ငံ ညွှန်းကိန်း" (failed state index) အရ နိုင်ငံပေါင်း ၁၇၇ ခုတွင် အကြမ်း ဖက် ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပေါ်၍ နစ်နာဖွယ်ရှိသော၊ လူမှုရေးအရ ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာဖွယ်ရှိသော ၁၂ ခု မြောက်နိုင်ငံအဖြစ် တန်းစီသတ်မှတ်ခံထားရသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ လေ့လာချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံက အဆင့် ၁၄ နေရာတွင် ရှိခဲ့ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံက ယခုနှစ်တွင် ပိုမိုကျဆင်းသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော် ပြိုကွဲကိန်း ဆိုက်နေရပြီ ဖြစ်သည်။
" ယခုအခြေအနေမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကောင်းတဲ့အနာဂတ် အလားအလာတွေ ဖြစ်ပေါ်နေတာ ကျနော်တကယ်ကို မတွေ့ရသေးပါဘူး" ၀ါရှင်တန် ဒီစီမြို့ ဂျော့ခ်ျတောင်းတက္ကသိုလ်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူ ဒေးဗစ် စတိန်းဘာ့ဂ် (David Steinberg) က ပြောသည်။
စစ်တပ်ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များနှင့် တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများ အပါအ၀င် အတိုက်အခံ အင်အားစုများ၏ ရည်ရွယ်ချက် များက ပြဒါးတလမ်း၊ သံတလမ်းဖြစ်နေကြပြီး ယခု ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်နှင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲများကြောင့်လည်း အပြောင်း အလဲများ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်လာရန် မမြင်ရပါ။
အတိုက်အခံအင်အားစုများကလည်း အမျိုးသားပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် တတ်နိုင်သမျှ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင် လှုပ်ရှားကြလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အသစ်သော ဖွဲ့စည်းပုံ အခင်းအကျင်းများအရ အတွင်းဝင်၍ ဆောင်ရွက် လျှင်လည်း ထိရောက်မှု အနည်းငယ်မျှသာ ရနိုင်ခြေ ရှိပါသည်။ အကြောင်းမှာ စစ်တပ်က အသာစီးယူ လွှမ်းမိုးထိန်းချုပ် ထားသောကြောင့် ဖြစ်ပြီး၊ သို့ဆိုလျှင် အခြားရွေးချယ်စရာ လမ်းကြောင်း၊ လှုပ်ရှားမှုများကိုသာ ဆက်လက်ဖော်ဆောင်ကြရ ဖွယ် ရှိပါတော့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်- လူထုကို လှုံ့ဆော်စည်းရုံး လှုပ်ရှားစေသည့် လုပ်ငန်းများနှင့် နိုင်ငံတကာကို စည်းရုံး တိုက်တွန်းသည့် လုပ်ငန်းများကိုသာ ပို၍ ဦးစားပေး လုပ်လာရဖွယ် ရှိနေသည်။
အခြားတဖက်တွင်လည်း စစ်တပ်က သူ၏တဖက်သတ်ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည့် အကြွင်းမဲ့ ထိန်းချုပ်ရေးကို ဖွဲ့စည်းပုံအသစ် နှင့် ရွေးကောက်ပွဲများကို အသုံးချ၍ ဆက်လက် အတင်းအကျပ် အကောင်အထည်ဖော်လိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ ပဋိပက္ခ ကြောင့် သူတို့ပေးဆပ်ရမည့် အရင်းအနှီး တန်ဖိုးများကို လျှော့ချရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဤမူဝါဒများအတိုင်း ဆက်၍သွားပါက မြင်သာ သည့်ရလဒ်မှာ နိုင်ငံတကာက ဆက်လက် ၀ိုင်းပယ်ခံရခြင်းနှင့် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး တိုး၍ ကျဆင်းရမည့် အခြေ အနေပင် ဖြစ်ပါသည်။
"စစ်တပ်က တဖက်သတ် အဖြေရှာတဲ့ အနေအထားမျိုးကို ကျနော်တို့ လုံးဝ လက်မခံနိုင်ဘူး" ယခင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဟောင်းတဦး ဖြစ်သူနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ မြန်မာအရေးလှုပ်ရှားနေသည့် US Campaign for Burma အဖွဲ့၏ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာတဦး ဖြစ်သူ ဦးအောင်ဒင်က ပြောပါသည်။ "စစ်တပ်ရယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ရယ်၊ တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေရယ် အတူတကွ စေ့စပ်ညှိနှိုင်း ပြေလည်မှု မရမချင်း အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေက စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်မှုတွေ ရုပ်သိမ်းသွားမှာ မဟုတ်ဘူး" သူက ပြောသည်။
နိုင်ငံပြင်ပရှိ မြန်မာ့စီးပွားရေးပညာရှင် ဦးစိန်ဌေးကမူ ထိုထက်ပို၍ ခန့်မှန်းပြောဆိုခဲ့သည်။ " အနောက်တိုင်း စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုတွေ ရှိနေနေ-မရှိနေနေ၊ စစ်အစိုးရရဲ့ မူဝါဒအမှားတွေနဲ့ လွဲချော်နေတဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်လာဖို့ အလားအလာ မရှိဘူး။ လူထုတွေ သက်သာချောင်ချိရေးလည်း ရလာဖွယ် မရှိဘူး။ သူတို့ကိုယ်တိုင် ပြန်ဖျက် ဆီးသလို ဖြစ်နေတယ်။ ၂၀၁၀ အပြီးမှာ နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးအခြေအနေက ပိုလို့ ဆိုးသွားလိမ့်မယ်" ဟု ပြောခဲ့သည်။
စစ်တပ်က အများသူငါ အကျိုးစီးပွားများနှင့် ညှိနှိုင်းပြေလည် ရယူလိုစိတ် မရှိသောကြောင့်၊ နောက်ထပ် လူထုအုံကြွလှုပ် ရှားမှုများ ဖြစ်ပေါ်ရန် အလားအလာ၊ ခြိမ်းခြောက်မှုများလည်း ရှိနေပါသေးသည်။ ပို၍ ဖိနှိပ်မှုများ လုပ်ဆောင်လာဖွယ်ရှိနေ ပြီး၊ စစ်တပ်အပေါ် လူထုက နာကျည်းဒေါသဖြစ်နေရမှုများ၊ မုန်းတီးမှုများကလည်း တိုး၍ ဖြစ်လာဖွယ် ရှိပါသည်။
" ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့တိုင်အောင် စစ်တပ်ဗိုလ်ချုပ်တွေက လူတွေကို အခုလို အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေ အုပ်ချုပ်တာ တွေ ဆက်လုပ်နေကြဦးမှာပဲ။ လူတွေမှာ အခုခံစားနေကြရတဲ့ ဒေါသတွေက လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် သံဃာ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကို အကြမ်း ဖက်နှိမ်နင်းတဲ့အချိန်ကစလို့ အမြင့်ဆုံးအနေအထား ရောက်လာတယ်။ နောက်ပိုင်း မုန်တိုင်းကယ်ဆယ်ရေးကိစ္စတွေမှာ လူထုဒုက္ခတွေကို စစ်အစိုးရက လျစ်လျူရှုထားတာကြောင့် မကြေနပ်မှုတွေ ပိုလို့ ထပ်ဆောင်းပြင်းထန်လာတယ်" မြန်မာ နိုင်ငံ၏ စစ်ဖက်-အရပ်ဖက် ဆက်ဆံရေးကိစ္စများကို လေ့လာနေသူ သုတေသီ ဦးဝင်းမင်းက ပြောပါသည်။ "အရပ်ဖက်- စစ်ဖက် ဆက်ဆံရေးမှာ ပဋိပက္ခသဘောဆောင်ပြီး ဆက်သွားလိမ့်မယ်"။
အဖွဲ့အသီးသီး၏ ရည်မှန်းချက်များနှင့် ဆက်ဆံရေးကိစ္စများကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲစေအောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ရုံမျှမက၊ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး တက်လာမည့် အစိုးရကလည်း ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံက ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရသော အရေးပါသည့် ပြဿနာ များကို ပြောင်းလဲစေနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ ယခု အထီးကျန်အနေအထားကိုလည်း ပြောင်းလဲနိုင်ဖွယ် အကြောင်း တစုံတရာ မမြင်ရပါ။
စစ်အစိုးရက ပြဌာန်းခဲ့သည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသစ်အရ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က စစ်တပ်ရေးရာကိစ္စများ ကို လွတ်လပ်စွာ စီမံခန့်ခွဲရှိမည်ဖြစ်ပြီး၊ တပ်သားသစ်စုဆောင်းမှုနှင့် တပ်တိုးချဲ့မှု လုပ်ပိုင်ခွင့်များ၊ ရာထူးခန့်ထားမှု၊ တပ် နေရာချထားမှု၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ စစ်တပ်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ စစ်လက်နက်ပစ္စည်း ၀ယ်ယူ ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စများ အပါအ၀င် သူ့သဘောအတိုင်း စီမံခွင့်ရှိနေမည် ဖြစ်သည်။
တပြိုင်နက်တည်းမှာပင် ကလေးစစ်သားပြဿနာ၊ အဓမ္မ ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားမှုများ၊ အဓမ္မလုပ်အားခိုင်းစေမှုများ၊ မြေမြှုပ်မိုင်း ပြဿနာ၊ ပြည်တွင်းတွင် အခြေမဲ့ ပြောင်းရွှေ့ထွက်ပြေးနေကြရသူ ဒုက္ခသည်များ၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသို့ ဒုက္ခ သည်များ ထွက်ပြေးနေရမှု၊ မုဒိမ်းမှုနှင့် အခြားသော လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ စသဖြင့် စစ်ဆေးထိန်းကွပ်မှုမရှိဘဲ ကျင့်သုံးနေကြသည့် စစ်တပ်၏ အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာနှင့် အမူအကျင့်ဆိုင်ရာ ဆက်စပ်နေသည့် ပြဿနာများမှာလည်း ဖြေ ရှင်းနိုင်ခြင်း မရှိဘဲ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေကြမည် ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းကဲ့သို့သော တိုင်းရင်းသား ဒေသများတွင် ဤပြဿနာများ ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်နေပေလိမ့်မည်။
ထို့အပြင် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံထားရသည့် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဥပဒေပြုခွင့်အာဏာကို ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်ထားခြင်း ကြောင့်လည်း စစ်တပ်ကို ကြီးကြပ်ခွင့်ရကြမည် မဟုတ်ပေ။ စစ်တပ်က ကျူးလွန်ချိုးဖောက်ခဲ့သော ပြစ်မှုများကိုလည်း ပြန်လည် ကုစားဖြေရှင်းပေးနိုင်မည့် အရပ်ဖက်ယန္တယားများကိုလည်း ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နိုင်ကြလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ ရာဇ ၀တ်မှု ကျူးလွန်သည်ဟု စွပ်စွဲခံရသူ တပ်မတော်သားများကို တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က ခန့်အပ်သူများဖြင့် ဖွဲ့ စည်းသည့် စစ်တပ်ခုံရုံးများတွင်သာ စစ်ဆေးအပြစ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ သေချာသည်မှာ အရေးယူအပြစ်ပေးခံရခြင်း မရှိဘဲ စစ်တပ်ကို ဆက်လက်၍ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခွင့် ပေးထားဦးမည့်ပုံ ရှိနေပါသည်။
သို့သော်လည်း ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကြောင့် ကနဦးကာလတွင် ရုပ်ပြသဘောဖြစ်စေ ခေါင်းဆောင်မှု ပြောင်းလဲသွားဖွယ် အခြေအနေ ရှိနေပါသည်။ အာဏာဗဟိုချက်မ ၂- ခုဖြစ်လာဖွယ် ရှိပြီး တဖက်က စစ်တပ်၊ တဖက်က အစိုးရ ဖြစ်လာဖွယ် ရှိ နေပါသည်။ စစ်တပ်အတွက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကို သီးသန့်ဖယ်ချန်ထားစေသည့် အပြင်၊ အရေးကြီး သည့် ၀န်ကြီးနေရာ ၃- ခုဖြစ်သည့် (ကာကွယ်ရေး၊ ပြည်ထဲရေး၊ နယ်စပ်ဒေသ ရေးရာ ၀န်ကြီးဌာန) တာဝန်များကို ခန့်အပ် တာဝန်ပေးခွင့်လည်း စစ်တပ်က ရယူထားပါသေးသည်။ ထို့အပြင် စစ်ဗိုလ်ချုပ်များက ကျန်သည့် အစိုးရ၀န်ကြီးဌာနနေရာ များနှင့် လွှတ်တော်အမတ်နေရာများကို ၎င်းတို့၏ လူမိုက်ဆန်ဆန် အရပ်သားအဖွဲ့အစည်း၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ (USDA) အဖွဲ့ဝင်များဖြင့် ဖြည့်ဆီးရန်လည်း ကြံစည်ထားကြပါသေးသည်။
ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲခိုး၊ မဲညစ်မည်၊ ကြံ့ဖွံ့အဖွဲ့ဝင်များကလည်း အတိုက်အခံကိုယ်စားလှယ်များနှင့် နှီးနွယ်သူများကို ခြိမ်း ခြောက်မှုများ၊ ဗိုလ်ကျတိုက်ခိုက်မှုများ ပြုကြမည်မှာ သေချာနေပါသည်။ ခိုင်လုံသည့် သာဓကများလည်း ရှိနေပါသည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်က ကြံ့ဖွံ့အဖွဲ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကားတန်းကို အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီး၊ နောက်ပိုင်းနှစ်များ တွင် အတိုက်အခံလှုပ်ရှားသူများကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်တိုက်ခိုက်မှုများလည်း ကျူးလွန်ခဲ့ကြဖူးသည့် လက်မရွံ့ သာဓကများ ရှိနေကြပါသည်။ ကမ္ဘာကြီးအနေဖြင့် မကြာသေးမီက ပြီးခဲ့သည့် ဇင်ဘာဘွေရွေးကောက်ပွဲများနည်းတူ လူမိုက်အုပ်စုများဖြင့် ရမ်းကားဗိုလ်ကျကြမည့် ဒီမိုကရေစီမျိုးကို မြင်တွေ့ကြရဖွယ် ရှိနေပါသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်ပိုင်း အာဏာခွဲဝေမှုတွင် အာဏာဗဟိုချက်မ ၂-ခု အကြား ပဋိပက္ခများ ကြုံလာရ ဖွယ် ရှိနေပါသည်။ အမိန့်ပေးစနစ် ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ အကျိုးစီးပွားကိစ္စများအပေါ် အခြေခံပြီး ပေါ်ပေါက်လာ ဖွယ် ရှိပါသည်။ ယခုအချိန်ကတည်းကပင် သတင်းများအရ စစ်တပ်မှ အရာရှိများနှင့် ကြံ့ဖွံ့အဖွဲ့ဝင်များအကြား ကြီးလေးသည့် သဘောထားကွဲလွဲမှုများ၊ တင်းမာမှုများ စတင်ပေါ်ပေါက်လာနေပြီဟု ဆိုကြပါသည်။ ကြံ့ဖွံ့အဖွဲ့ဝင်များက စစ်တပ်၏ အုပ်ချုပ် ရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်အတွင်း ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှုများ ရှိလာခဲ့ပြီး၊ အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာ ပြဿနာများအပေါ် အခြေခံ၍ မကြေ လည်မှုများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
စစ်တပ်က အာဏာခွဲဝေအုပ်ချုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများတွင် အတွေ့အကြုံ မရှိခဲ့ကြသည့်အလျောက်၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များက လည်း ကြံ့ဖွံ့အဖွဲ့ဝင်များ အစွမ်းပြလာကြသည်ကို လက်ခံနိုင်ရန် ခက်ခဲပါလိမ့်မည်။
"စစ်တပ်ထဲက အရာရှိတော်တော်များများက ကြံ့ဖွံ့တွေကို မုန်းကြတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ အချိန်လွန်သွားတာနဲ့အမျှ သူတို့လည်း ကျသွားမှာပဲလို့ တွက်ထားကြတယ်" စစ်တပ်နှင့် နီးစပ်သည့်သူများက ဆိုကြပါသည်။
မည်သူက ကြိုးဆွဲသည်ပင်ဖြစ်စေ၊ အစိုးရက အာဏာဗဟိုချက်မ ၂-ခုနှင့် အလုပ်လုပ်နေရလျှင် ကြီးလေးသည့် အတွင်း ဂိုဏ်းဂဏ ပဋိပက္ခများကြုံရဖွယ် ရှိသလို၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အတွင်း ဘာမှ လုပ်၍ကိုင်၍ မရသည့် အခြေအနေမျိုးလည်း ဖြစ်နေနိုင်ပါသည်။
အချို့သော ထောက်ခံပြောဆိုသူများက ယခုပုံစံအတိုင်းဖြင့် တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲတိုးတက်လာကာ နောက်ဆုံး ပွင့်လင်း လွတ်လပ်သည့် အခြေအနေ ရောက်သွားနိုင်သည်ဟုလည်း ဆိုကြပါသည်။ ထိုသူများက စစ်တပ်၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေသည် အားနည်းချက်များ ရှိနေသော်လည်း၊ နောက်ထပ် မျိုးဆက်သစ် စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်များအတွက် ပြုပြင် ပြောင်းလဲနိုင်သော အခွင့်အလမ်းများ ရလာစေမည်ဟု ယုံကြည်နေကြပါသည်။ ထိုသူများက ယခု ဗိုလ်ချုပ်များရေးဆွဲ ထားသည့် အားနည်းချက်များပြည့်နေသော ဒီမိုကရေစီပုံစံကို လက်ခံလိုက်ပြီး၊ ရေရှည်တွင် လူအများက ပို၍ လက်ခံနိုင် ဖွယ်ရှိသည့် အဖြေဖြစ်ပေါ်လာစေရန် စတင်သည့် တာထွက်အဖြစ် အသုံးချနိုင်သည်ဟုလည်း ဆိုကြပါသည်။
သို့သော်လည်း ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ပေါ်ထွက်လာမည့် အစိုးရ၏ အာဏာပြိုင်ဆိုင်မှု သဘောသဘာဝအတွင်း၌ လမ်းပွင့်လာမည့်သဘော၊ ရေရှည်တွင် ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အနေအထားကို မတွေ့ကြရပါ။ ဤသို့ဖြစ်ခဲ့မည်ဆိုလျှင်သော်မှ ရေရှည်သည် မည်မျှအချိန်ယူ စောင့်ကြရမည်နည်း၊ မည်မျှ ရေရှည်မည်နည်းဟု မေးခွန်း ထုတ်ဖွယ် ရှိနေပါသည်။ သိပ်ရေရှည်ကြာမြင့်လွန်းမည်ဆိုပါကလည်း တိုင်းပြည်အတွင်းနှင့် ပြင်ပရှိ အတိုက်အခံအဖွဲ့ အစည်းများအနေဖြင့် မဟာဗျူဟာအရ အရေးမပါတော့သည့် အနေအထားတိုင် ရောက်ရှိသွားနိုင်ပါသည်။
အမှန်တွင် စစ်အစိုးရက အတင်းအကျပ်ချထားသည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအတွင်း၌ နိုင်ငံရေးအရ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာရန် အခြေအနေ မရှိပါ။ စစ်တပ်၏ ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ချက်များ ပြုရန် ကြံစည်ထားသည် ထားဦး၊ စစ်တပ်က လွှမ်းမိုးထားသည့် လွှတ်တော်ဆွေးနွေးပွဲများတွင်သော်လည်းကောင်း၊ အသစ်သော အာဏာဖွဲ့စည်းပုံအရ သော်လည်းကောင်း၊ တဖြည်းဖြည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟူသည့် မျှော်လင့်ချက်မှာ ဖြစ်နိုင်ခြေ မရှိ ပါ။ လူထုက ဖိအားပေးတောင်းဆိုကြပြီး၊ နောက်ဆုံး စစ်တပ်က လိုက်လျောညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရသည့် အခြေအနေမှသာ လက်ရှိ ဗိုလ်နေမြဲ-ကျားနေမြဲ အခြေအနေမှ ရုန်းထွက်နိုင်ဖွယ် ရှိပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲပြီး အလား အလာများကလည်း အားလျော့ဖွယ် မှေးမှိန်နေပါသည်။
သို့အတွက်ကြောင့် ကုလသမဂ္ဂ ဦးဆောင်သည့် နိုင်ငံတကာမိသားစုအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အင်အားစုအားလုံး ပါဝင်နိုင် သည့် နိုင်ငံရေးပြေလည်မှု ရရှိစေရေးအတွက် ၂၀၁၀ မတိုင်မီတွင် ၎င်းတို့၏ ကြိုးပမ်းမှုများကို နှစ်ဆတိုးဆောင်ရွက်ကြရန် လိုအပ်နေပါသည်။ အရေးပါသည့် အင်အားစု၊ အဖွဲ့အသီးသီးအကြား အဓိပ္ပါယ်ရှိသည့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများ ဖြစ်လာစေ ရေးအတွက် အင်အားသုံးစေ့စပ်စေသည့် သံတမာန်ရေးနည်းလမ်းဖြင့် ကြားဝင်ရန် လိုအပ်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ စစ်အစိုးရကို "ယုံကြည်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည့်၊ အင်အားစု အားလုံးပါဝင်နိုင်သည့်" ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံနေရုံ မျှဖြင့် အလုပ်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ဤရွေးကောက်ပွဲများမှ ထွက်ပေါ်လာမည့်ရလဒ်သည် စစ်အစိုးရ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ ဥပဒေအလိုကျအတိုင်း ဖြစ်လာလိမ့်မည်ကို နိုင်ငံတကာ မိသားစု အနေဖြင့် အပြည့်အ၀ နားလည်သဘောပေါက်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါက ဇူလိုင် ၁၉ ရက်နေ့က ဘရပ်ဆယ်တွင် ဥရောပသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်များ ပြုခဲ့ကြသကဲ့သို့ အမှားကြီး ထပ်မံကျူးလွန်ဖွယ် ဖြစ်လာနိုင်ပါ သည်။ ထိုအစည်းအဝေးတွင် ဥရောပသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်များက စစ်အစိုးရအနေဖြင့် " ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးမည်ဟု ကြေညာထားသည့်အတိုင်း ပြင်ဆင်မှုများ သေချာဆောင်ရွက်ရန်နှင့် လူအများလက်ခံယုံကြည်နိုင်သည့်၊ အားလုံးက အပြည့်အ၀ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိသည့် ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ် အကောင် အထည်ဖော်ရန်" တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ အတွင်း တရားကိုယ်သဘောအရ၊ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်လာနိုင်သည့် အကျိုးဆက် များအရ အန္တရာယ်ကို တွက်ဆခြင်းမပြုဘဲ ဥရောပသမဂ္ဂ ခေါင်းဆောင်များက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို အလောသုံးဆယ် တွန်းအားပေးခဲ့ကြသည်။ ဤသို့ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ကိုလည်း သူတို့က မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီအရေး အတွက် ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ပြီဟု ကြေနပ်ပုံလည်း ရနေကြသည်။ ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ၀မ်းနည်းဖွယ်ကိစ္စဖြစ်ပြီး၊ မဟာ ဗျူဟာအရ အကြီးအကျယ်လွဲချော်မှုလည်း ဖြစ်ပေသည်။
မကြာမီကာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ နောက်ထပ်တခေါက် လာရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် ကုလသမဂ္ဂ၏ အထူးသံ မစ္စတာ အီဗရာဟင် ဂမ်ဘာရီအနေဖြင့်လည်း စစ်အစိုးရ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို တရားဝင် ထောက် ခံမှု မပေးမိလိုက်စေရန် အထူးသတိထားရပါလိမ့်မည်။ အင်အားစု အားလုံးပါဝင်နိုင်ခြေရှိသည်ဟု တွက်ဆခဲ့ပြီး စစ်အစိုးရ၏ "လမ်းပြမြေပုံ" ကို တချိန်က ထောက်ခံခဲ့သည့် ကုလသမဂ္ဂ အနေဖြင့်၊ ယခုအချိန်တွင် ဤမြေပုံသည် အခြားအရေးပါသည့် အင်အားစုများကို စုစည်း ဆွဲဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိတော့သည့်အတွက် မကိုက်ညီတော့ကြောင်း ပြတ်သားရှင်းလင်းစွာ ပြောဆိုရတော့မည့် အချိန် ဖြစ်ပါသည်။
အချုပ်ဆိုရသော် ကုလသမဂ္ဂ ဦးဆောင်သည့် နိုင်ငံတကာမိသားစုအနေဖြင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် မတိုင်မီအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် အင်အားစုအားလုံး ပါဝင်ဖြေရှင်းနိုင်မည့် နိုင်ငံရေးပြေလည်မှု ရရှိရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ချက်များကို လက်မလျှော့ သင့်သေးပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
မြန်မာ့ကျောက်မျက် တင်သွင်းမှု ပိတ်ပင်သည့် ဥပဒေမူကြမ်း အမေရိကန် အောက်လွှတ်တော် အတည်ပြု
မြန်မာနိုင်ငံ စစ်အစိုးရရဲ့ စစ်အသုံးစရိတ်နဲ့ ထိပ်ပိုင်းအရာရှိကြီးတွေအတွက် အဓိက
ဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေတွေကို ပိတ်ဆို့နိုင်ရေးရည်ရွယ်တဲ့ Block Burmese Jade
Act လို့ အမည်ရတဲ့ ဥပဒေကြမ်းတခုကို အမေရိကန် အောက်လွှတ်တော်က တခဲနက်
အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ အထက်လွှတ်တော်ကလည်း အတည်ပြုမှာမို့ သမ္မတအိမ်ဖြူ
တော်က လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ အပြည့်
အစုံကို ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်း ဌာနမှူး ဦးသန်းလွင်ထွန်းက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ နိုင်ငံရဲ့ ပေါကြွယ်ဝတဲ့ သယံဇာတပစ္စည်းတွေကို နိုင်ငံရပ်ခြားကို
တင်ပို့ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေတွေနဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးမှာ အသုံးမချဘဲ
စစ်တပ်အင်အားတိုးချဲ့၊ ပြည်သူတွေကို နှိပ်စက်နေရုံတင်မက ထိပ်ပိုင်းစစ်ခေါင်းဆောင်
ကြီးတွေရဲ့ ကိုယ်ကျိုးစီးပွား တိုးတက်ရေးသက်သက်ကိုပဲ လုပ်ကိုင်နေတာမို့ စစ်အစိုးရရဲ့
ဒီလို ၀င်ငွေ ရပေါက်ရလမ်းတွေကို ပိတ်ဆို့ရလိမ့်မယ်လို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
လွှတ်တော်အတွင်း ပါတီနှစ်ရပ်စလုံးက တခဲနက် အတည်ပြုလိုက်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစောပိုင်းကတည်းက ရှိနေနှင့်ပြီးဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ လွတ်လပ်မှုဥပဒေအရ
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်မှုတွေကို နှစ်စဉ် သက်တမ်းတိုး အတည်ပြု
လုပ်ဆောင်နေပေမယ့် တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာ ယိုပေါက်တွေ ရှိနေခဲ့တာမို့ အခုလို
အထူးတလည် ဥပဒေသစ် ပြဋ္ဌာန်းလုပ်ဆောင်ရတာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ဒီနေ့ အင်္ဂါနေ့ လွှတ်တော်အတွင်း မဲခွဲရာမှာ အဆိုပြု တင်ပြခဲ့သူတဦးဖြစ်တဲ့ လူဝီစီယား
နားပြည်နယ်အမတ် မစ္စတာ မက်ကျူရီက အခုလိုပြောပါတယ်။
“ကွယ်လွန်သူ လွှတ်တော်အမတ် တွမ်လန်းတို့စ် မနှစ်က အစပျိုးတင်သွင်းခဲ့တဲ့ ဒီဥပဒေ
ကြမ်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့ ကျောက်စိမ်း၊ ပတ္တမြား စတဲ့ အဖိုးတန်
ကျောက်မျက်ရတနာတွေကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို တင်သွင်းခွင့်မပြုဘဲ ပိတ်ဆို့ဖို့
ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံက တိုက်ရိုက်တင်သွင်းမှုတင်မက မြန်မာနိုင်ငံက
ထွက်တဲ့ ကျောက်မျက်ရတနာတွေကို လက်ဝတ်လက်စားအဖြစ် ပြောင်းလဲပြီး တတိယ
နိုင်ငံတွေကတဆင့် တင်သွင်းလာမှာကိုပါ ပိတ်ဆို့နိုင်မယ့် အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို
နည်းလမ်းနဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရ ရရှိနေတဲ့ ၀င်ငွေတွေကို ပိတ်ဆို့နိုင်ပါလိမ့်မယ်” လို့
လူဝီစီယားနားပြည်နယ် လွှတ်တော်အမတ် မစ္စတာ မက်ကျူရီက ပြောကြားသွားတာ
ရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၃၀၀ လောက် ၀င်ငွေရှိနေတယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ အခု
အမေရိကန်လွှတ်တော်မှာ တင်သွင်းတဲ့ ပိတ်ဆို့ရေး အဆိုပြုချက်ကို အမေရိကန်
ထိပ်တန်း ကျောက်မျက်ရတနာ ကုမ္ပဏီကြီးတွေဖြစ်တဲ့ တစ်ဖ်နီနဲ့ ဘာလ်ဂါရီလို ကုမ္ပဏီ
ကြီးတွေကရော လက်ဝတ်ရတနာဆိုင်ပေါင်း တထောင်ကျော်ကပါ ထောက်ခံ သဘော
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်အတွင်း ဆွေးနွေးပွဲမှာ အဆိုပြုခဲ့သူ နောက်တဦး
ဖြစ်တဲ့ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်အမတ် မစ္စ ရို့စ်လေတန်ကတော့ …
“မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟာ သူ့ရဲ့သမီး မင်္ဂလာဆောင်
အတွက် အသုံးစရိတ်ကို တနိုင်ငံလုံးရဲ့ ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်ထက် သုံးဆပိုပြီး
အကုန်အကျခံခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ စိန်တွေ၊ ရွှေတွေသီးနေတဲ့ သူ့သမီးရဲ့ဓာတ်ပုံ
တွေကို မြင်ရတာဟာ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံတခုဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေနဲ့
နှိုင်းယှဉ်ပြီး အလွန်စိတ်ပျက်စရာ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်” လို့ မစ္စလေတန်က ပြောကြားသွားပါ
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်က ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေရဲ့သမီး မင်္ဂလာဆောင်
အကြောင်း မြင်တွေ့ရမှုကို အခုလို ပြန်ပြောင်းပြောပြခဲ့တဲ့အပြင် ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ
လက ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးလို့ခေါ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ သံဃာတော်များဦးဆောင်တဲ့
လူထုလှုပ်ရှားမှုကို စစ်အစိုးရက နှိပ်ကွပ်ခဲ့ပုံ၊ မေလအတွင်းက တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ နာဂစ်
ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းအပြီး နိုင်ငံတကာရဲ့ အကူအညီပေး ကမ်းလှမ်းချက်တွေကို လျစ်လျူ
ရှုပြီး စစ်အစိုးရအနေနဲ့ သူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် အခြေခံဥပဒေ အတည်ပြုရေး
လူထုဆန္ဒခံယူပွဲကို အတင်းအကျပ် ကျင်းပခဲ့ပုံ စတာတွေကိုလည်း အောက်လွှတ်တော်
အခုအတည်ပြုလိုက်တဲ့ ဥပဒေကြမ်းကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ ကယ်လီဖိုးနီးယား
ပြည်နယ် ဒီမိုကရက်လွှတ်တော်အမတ် မစ္စတာ ဘားမန်းကတော့ …
“မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင် နိုဘယ်လ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်း
စုကြည် ပြောကြားခဲ့ဖူးတာကတော့ သင်တို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကို အသုံးချပြီး ကျမတို့ရဲ့
လွတ်မြောက်မှုကို မြှင့်တင်ဆောင်ကြဉ်းပေးပါလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့မှာတော့
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်အတွင်းမှာ ကျနော်တို့ရဲ့ လွတ်လပ်မှုတွေကို
အသုံးချပြီး မြန်မာစစ်အစိုးရကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေ တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်း
အားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက် လွတ်လပ်မှုနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ရှောက်မှု
တွေကို ပိုပြီး တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်” လို့ လွှတ်တော်အမတ် မစ္စတာဘားမန်းက
ဒီအောက်လွှတ်တော်အတွင်း အတည်ပြုလိုက်တဲ့ ဥပဒေကြမ်းကို အထက်လွှတ်တော်က
လည်း မကြာခင် အတည်ပြုပေးမှာမို့ အိမ်ဖြူတော်က သမ္မတကိုယ်တိုင် လက်မှတ်
ရေးထိုး အတည်ပြုပြီးရင် ဥပဒေအဖြစ် မကြာခင် အတည်ပြု အကောင်အထည် ပေါ်လာ
ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု ဥပဒေသစ်က မြန်မာနိုင်ငံမှ အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတခုကို သက်သာခွင့်ပေး
Agencies/ ၁၆ ဇူလိုင် ၂၀၀၈
အမေရိကန် အောက်လွှတ်တော်အမတ်များ ယမန်နေ့က အတည်ပြုခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်သည့် ပိတ်ဆို့မှု ဥပဒေအသစ်သည် မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် လုပ်ငန်းတွဲလုပ်နေသည့် အမေ ရိကန် စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီ ရှဗရွန်ကိုလည်း ဖိအားပေးရာ ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း လွှတ်တော် တာဝန်ရှိသူများက ပြောသည်။
ရှဗရွန်ကုမ္ပဏီက အခြားအမေရိကန်ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်သော ယူနိုကယ်ထံမှ ရှယ်ယာ (၂၈) ရာခိုင် နှုန်းကို ၂၀၀၅ ခုတွင် ၀ယ်ယူခဲ့ပြီး ရတနာသဘာဝဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်ရေး စီမံကိန်းတွင် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံ၍ လုပ်ကိုင်နေခြင်းဖြစ်သည်။
ရှဗရွန်က ခံစားနေရသော အခွန်လျော့ပေါ့ပေးဆောင်ရမှုအား ရပ်စဲရမည်ဟု ပိတ်ဆို့ရေး ဥပဒေ အသစ်ကို စတင် တင်သွင်းခဲ့စဉ်က ပါဝင်သော်လည်း စီမံကိန်းမှ ထွက်ခွာခဲ့သော် တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယတို့မှ ကုမ္ပဏီများက လွယ်ကူစွာ အစားထိုးရယူသွားမည်ဟု ရှဗရွန်က ပြန်လည်ပြောဆို ခဲ့သည့်အတွက် ထိုပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ထည့်သွင်းခြင်း မပြုရန် သဘောတူခဲ့သည်။
အထက်လွှတ်တော်ကလည်း ခွင့်ပြုမည်ဟု မျှော်လင့်ရသော အဆိုပါ ပိတ်ဆို့ရေး ဥပဒေမူကြမ်းက မြန်မာနိုင်ငံရှိ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်နေသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ အနေဖြင့် အကယ်၍ မြန်မာစစ်အစိုးရက စစ်မှန်သည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ မလုပ်ခဲ့ပါက မိမိတို့ဆန္ဒအလျောက် လုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းကြရန် ရှင်းလင်းစွာ တောင်းဆိုထားသည်။
ရတနာသဘာဝဓာတ်ငွေ့ လုပ်ကွက်အတွင်းရှိ ရှဗရွန်၏ အကျိုးတူ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ ဖြစ်ကြ သော ပြင်သစ်ရေနံကုမ္ပဏီ တိုတယ်၊ ထိုင်းစွမ်းအင် ရှာဖွေထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ ပီတီတီ၊ မြန်မာ့ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းတို့အား ရှဗရွန်က ငွေပေးချေရန်ရှိသည်များကိုလည်း ဥပဒေ အသစ်က ပိတ်ပင်ထားသည်။
အကယ်၍ ရှဗရွန်က ၎င်းပိုင် အစုရှယ်ယာများကို ပြန်ရောင်းမည်ဆိုပါက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေအရ စစ်အစိုးရအား အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း (၅၀၀) ခန့် ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
ဥပဒေမူကြမ်း၏ အဓိက ဦးတည်ချက်မှာ မြန်မာစစ်အစိုးရအတွက် ဒေါ်လာ သန်းရာနှင့်ချီ၍ နစ်နာစေရန်အတွက် မြန်မာ့ကျောက်မျက်များ အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့မှုကို ပိတ်ဆို့ရန်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့မှုများ ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ။
မြန်မာကျောက်မျက်ရတနာများ အမေရိကန်နိုင်ငံ တင်သွင်းခွင့် ပိတ်တော့မည်
မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေ အဓိကလုပ်ငန်းတခုဖြစ်သည့် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာများ အမေရိကန်နိုင်ငံတင်သွင်းမှု ပိတ်ဆို့မည့် ဥပဒေမူကြမ်းတခုကို အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်က ယမန်နေ့တွင် အတည်ပြုလိုက်ပြီး အထက်လွှတ်တော်သို့ ပြန်လည်တင်ပြတော့မည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုကို အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းလေ့ရှိပြီး အဂတိလိုက်စားသည့် မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် ဘဏ္ဍာရေးအရ ဖိအားပေးရန် ရည်ရွယ်၍ အဆိုပါဥပဒေမူကြမ်းကို အတည်ပြုလိုက်ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း အောက်လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားရေးရာ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဟိုးဝဒ် ဘားမန်းက ပြောသည်။
ဟိုးဝဒ် ဘားမန်းက “ဒီဥပဒေအရ မြန်မာ့ကျောက်မျက်တွေကို အမေရိကန်နိုင်ငံထဲ တင်သွင်းတာကို ပိတ်ဆို့တာ၊ ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို တိုးချဲ့ပိတ်ဆို့တာတွေ ဖြစ်လာတဲ့အတွက် ဒီစစ် အစိုးရအတွက် ဒေါ်လာ သန်း ရာဂဏန်းချီပြီး နှစ်စဉ်နစ်နာမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောကြောင်း အေပီ သတင်းတွင် ဖော်ပြသည်။
၂၀၀၃ ခုတွင် သမ္မတဘုရှ် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်မြောက်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီဥပဒေ Burmese Freedom and Democracy Act အား ပိုမိုခိုင်မာသစ်ဆန်းစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ကွယ်လွန် သူ အောက်လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားရေးရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း မစ္စတာတွမ်လန်းတော့စ်က Block Burmese JADE Act ခေါ် အဆိုပါ ဥပဒေမူကြမ်းကို ၂၀၀၇ ခု၌ ဦးဆောင်ရေးဆွဲ အဆိုပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယမန်နေ့က အတည်ပြုလိုက်သည့် ဥပဒေမူကြမ်းကို တစ်ဖ်နီနှင့် ဘာဂါရီကဲ့သို့သော အမေရိကန် ကျောက်မျက်ရတနာ ကုမ္ပဏီကြီးများ အပါအ၀င် ရတနာအရောင်းဆိုင် (၁၁,၀၀၀) ကလည်း ထောက်ခံကြကြောင်း ဟိုးဝဒ် ဘားမန်းက ပြောသည်။
ပိတ်ဆို့ရေးဥပဒေကို အတည်ပြုရခြင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရွေးကောက်ခံ ဒီမိုကရက်တစ် အစိုးရ တရပ်ဖြင့် အစားထိုးနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာစစ်အစိုးရအား ဖိအားပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ပိတ်ဆို့မှုအသစ် ကြောင့် မြန်မာကျောက်မျက်များကို တတိယနိုင်ငံများမှ တဆင့် အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ တင်သွင်း နေသည့် စစ်အစိုးရ လုပ်ရပ်များကို ထိခိုက်စေမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် ဆက်စပ်နေသော နိုင်ငံရေးနှင့် စစ်ရေးခေါင်းဆောင်များ၊ ၎င်းတို့၏ မိသားစု
၀င်များက တတိယနိုင်ငံများမှ တဆင့် အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများ အသုံးပြုနေမှုကို ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလည်း ယခု ဥပဒေသစ်အရ ထိန်းချုပ်သွား နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားဆန္ဒပြသူများအား အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်း ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သော စစ်အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများကိုလည်း အမေရိကန်ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ ထုတ်ပေး မည် မဟုတ်ပေ။
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေး ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းသည် သာမန်မြန်မာပြည်သူများကို ထိခိုက် ရန် မဟုတ်ဘဲ စစ်အစိုးရအပြင် စစ်အစိုးရနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုမ္ပဏီများ၊ စစ်အစိုးရကို မှီပြီး စီးပွားရှာနေသူများအတွက် ရည်ရွယ်ပစ်မှတ်ထားသည့် Targeted Sanctions ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်အစိုးရက ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောဆိုထားသည်။
ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အစိုးရဘက်က လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ ရပ်သွားစေမည့် သိသာ ထင်ရှားသည့် အဓိက တိုးတက်မျိုးများ ရှိခဲ့လျှင်ဖြစ်စေ၊ အရပ်သားအစိုးရကို အာဏာလွှဲပေးပါ မည်ဟု ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများအပေါ် စစ်အစိုးရက ကတိပေးလျှင်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်း သားများ လွှတ်ပေးပြီး ဒီမိုကရေစီ အစိုးရတရပ် ပေါ်ပေါက်လာအောင်လည်း ဖော်ဆောင်မည် စသည့်အချက်များ ရှိပါပြီဆိုသည့် အခြေအနေများကို ရွေးကောက်ခံထားရသည့် မြန်မာအရပ်သား အစိုးရက မေတ္တာရပ်ခံလာပါက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေး ဒဏ်ခတ်ထားခြင်းကို အမေရိကန် သမ္မတက ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်ဟု ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့သည့် ဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ ။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 16 2008 18:28 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေး ဦးဆောင် တောင်းဆိုခဲ့သည့် ကိုထင်ကျော်ကို ယနေ့တွင် အနောက်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံး၌ ၇ ကြိမ်မြောက် ရုံးထုတ်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လိုလားသူများ အဖွဲ့မှ ကိုထင်ကျော်အား အကျဉ်းထောင်အတွင်း အနောက်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးတွင် ရုံးထုတ်ရာ ရှေ့နေ ဦးအောင်သိန်းက လျှောက်လဲချက် တင်သွင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ရုံးထုတ်ပြီးသွားပြီရှင့်။ ဒီနေ့တော့ စစ်တာ မဟုတ်ဘူး။ စွဲထားတဲ့ ၃ မြို့နယ်က ပန်းပဲတန်း မြို့နယ် အတွက်ကို ရှေ့နေ ဦးအောင်သိန်းက လျှောက်လဲချက် တင်တယ်။ အခု ပြီးသွားပါတယ်” ဟု ကိုထင်ကျော်၏ ဇနီးသည် မသန်းသန်းမော်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
သူက ဆက်ပြီး “ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်မှာ စွဲတင်ထားတဲ့ ပုဒ်မနဲ့၊ ကိုထင်ကျော် လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့၊ နိုင်ငံတော်ကို အကြည်ညို ပျက်စေတယ်ဆိုတဲ့ ပုဒ်မနဲ့ တခြားစီ ဖြစ်နေတယ်။ သက်သေတွေရဲ့ ထွက်ဆိုချက်တွေကလည်း သူက ပြည်သူလူထုရဲ့ လိုအပ်ချက်ကိုသာ တောင်းဆိုခြင်းသာ ဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံတော်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ကိစ္စတွေ၊ စကားလုံးတွေ ဘာမှ မပါဘူး၊၊ ဒီပုဒ်မက တကျွန်းချနိုင်တဲ့ အနေအထား ရှိတယ်ဆိုတော့ ဒီပုဒ်မဟာ ပြင်းထန်လွန်းတယ်ပေါ့။ ရှေ့နေက လျှောက်လဲပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ကိုထင်ကျော်ကို ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့က ကမာရွတ်မြို့နယ် လှည်းတန်းလမ်းဆုံ၌ ဘုန်းကြီးဝတ်ခွင့် ဆန္ဒပြမှု၊ ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့က သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ် စံပြဈေးတွင် ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေး ဆန္ဒပြမှု၊ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့က ရန်ကုန် သိမ်ကြီးဈေးတွင် ဆန္ဒပြမှု စသည့် အမှုတမှုစီအတွက် အစိုးရကို အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၁၂၄ (က) ဖြင့် တရားစွဲဆိုထားခြင်း ဖြစ်သည်။
အမှုများကို အနောက်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးက တာဝန်ယူ စစ်ဆေးနေရာ ယနေ့တွင် ပန်းပဲတန်းမြို့နယ် ဆန္ဒပြမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရှေ့နေ ဦးအောင်သိန်းက လျှောက်လဲချက်ပေးခဲ့သည်။
၂ဝဝ၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်တွင် မြန်မာစစ်အစိုးရက လောင်စာဆီဈေးနှုန်း အဆမတန် တိုးမြှင့်သည့်အပေါ် ဈေးနှုန်းပြန်ချပေးရန် သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်တွင် အများပြည်သူက တောင်းဆိုဆန္ဒပြရန် ကိုထင်ကျော်က တိုက်တွန်း နှိုးဆော်ခဲ့ပြီး သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် သူကိုယ်တိုင်လည်း ရန်ကုန် သိမ်ကြီးဈေးရှေ့တွင် ဆန္ဒပြသဖြင့် အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
ကိုထင်ကျော်သည် အင်းစိန်ထောင်တွင် ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် သံဃာတော်များ၊ ကျောင်းသားများနှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ထောင်တွင်း၌ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြခဲ့သလို အကျဉ်းထောင်အတွင်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လမ်းလျှောက်ခွင့် ရရေးအတွက်လည်း ဆန္ဒပြရာ၌ တတိယအကြိမ်တွင် “စစ်အာဏာရှင်စနစ် ... ကျဆုံးပါစေ” ဟူသည့် ကြွေးကြော်သံကို အော်ဟစ်သဖြင့် ၃ ကြိမ်မြောက် စစ်ခွေးတိုက်တွင် တိုက်ပိတ်ခံခဲ့ရသေးသည်။
ဖဒိုမန်းရှာ လုပ်ကြံခံရမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးရန် ဗြိတိသျှအမတ်များက တောင်းဆို
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 16 2008 12:11 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ ၆ဝ ဦးခန့်ရှိသော ဗြိတိသျှပါလီမန် အမတ်များသည် မြန်မာတိုင်းရင်းသား သူပုန်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်သော ဖဒိုမန်းရှာလဖန် လုပ်ကြံခံရမှုကို စစ်ဆေးဖေါ်ထုတ်ပေးရန် 'Early Day Motion' ပန်ကြားချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ဗြိတိသျှအစိုးရကို တောင်းဆိုလိုက်ကြသည်။
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း တခုဖြစ်သည့် ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး လုပ်ကြံခံရသည့်ကိစ္စတွင် တရားဝင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု တစုံတရာ မရှိသည့်အတွက် ဗြိတိသျှ အစိုးရက တိုက်ရိုက် ဝင်ရောက် စုံစမ်းစစ်ဆေး၍ တရားခံများကို ဖေါ်ထုတ်ပေးပါရန် ဗြိတိသျှ ပါလီမန်အမတ်များက ဗြိတိသျှအစိုးရ ကို တောင်းဆိုလိုက်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
“ဗြိတိသျှ ပါလီမန်အမတ်တွေ ခုလို တောင်းဆိုတာကို ကျမတို့ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒါကျမတို့ကို စိတ်ဓါတ်အရ အားပေး ထောက်ခံရုံသာမက တရားမျှတမှုအတွက် တိုက်ပွဲဝင်တာလဲ ဖြစ်လို့ပါ” ဟု လောလောဆယ် ယူကေနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေသည့် မန်းရှာ၏ သမီးဖြစ်သူ ဇိုယာဖန်း က မဇ္ဈိမကို ပြောကြားသွားပါသည်။
အမည်မသိ သေနတ်သမား ၂ ဦးက မဲဆောက်မြို့ရှိ သူ၏ နေအိမ်တွင် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့က မန်းရှာလဖန် ကို ပစ်ခတ် သတ်ဖြတ်သွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ဒါ ဗမာစစ်အစိုးရ လက်ချက်ဆိုတာ ကျမတို့သိပေမယ့် တရားဝင် ဘာမှ ထုတ်ပြန် ကြေညာတာ မရှိလို့ ကျမတို့ ဝမ်းနည်း ရပါတယ်” ဟုဇိုယာ က ပြောသွားပါသည်။
ဤသို့ အကြမ်းဘက် လုပ်ရပ်များကို စီစဉ် ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်း အတွက်လည်း ဗြိတိသျှ ပါလီမန် အမတ်များက မြန်မာစစ်အစိုးရကို ပြစ်တင် ရှုတ်ချလိုက်သည်။ ဤကိစ္စအတွက် အရေးယူရန်နှင့် ကရင်နှင့် အခြား တိုင်းရင်းသား အရပ်သားများကို တိုက်ခိုက်နေခြင်းအားလည်း ရပ်တန့်ပေးပါရန် ဗြိတိသျှအစိုးရကို သူတို့က တိုက်တွန်း တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
သူ၏ မပြီးဆုံးသေးသော အလုပ်များကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် သူမတို့၏ ဖခင်ကို သတိတရ ဂုဏ်ပြုသည့် အနေနှင့် သူမ၏ အကို ၂ ဦး၊ ညီမတဦးတို့နှင့်အတူ “ဖန်းဖောင်ဒေးရှင်း” တရပ် ထူထောင်ထားရှိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
“ဒီဖောင်ဒေးရှင်းကနေ ကရင်လူမျိုးတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းဘို့နဲ့ ကရင်လူမျိုးတွေရဲ့ ပညာရေးကိုအကူအညီ ပေးဘို့ လုပ်သွားမှာပါ” ဟု ဇိုယာ က ပြောသွားပါသည်။
ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်အတွက် ရာစုနှစ်တဝက်ကျော် တိုက်ပွဲဝင်နေသည့် (KNU) ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ၂ဝဝ၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ဖဒိုမန်းရှာ ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံခဲ့ရသည်။
၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ သမိုင်းအဓိကဖြင့် ဘွဲ့ရရှိကာ ချက်ချင်းလိုပင် တောတွင်းရှိ ကရင်လှုပ်ရှားမှုတွင် ပူးပေါင်း လက်တွဲပါဝင်ခဲ့သည်။
တိုင်းရင်းသားများနှင့် မြန်မာလူမျိုး မဟာမိတ်များ အားလုံးက လေးစားခံရသူတဦး ဖြစ်ပြီး စစ်အစိုးရကလည်း KNU ၏ တောင့်တင်းခိုင်မာသော ခေါင်းဆောင်တဦးအဖြစ် သူ့ကိုရှုမြင်သည်။
ကွယ်လွန်ချိန်တွင် သူသည် အသက် (၆၄) နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 16 2008 21:32 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ ဘိုကလေးမြို့ အထက်ပိုင်းရှိ လယ်သမားများသည် အမြတ်ကောင်း ရရှိရန် သိုလှောင်ထားသည့် စပါးများ နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် ရေစိုဆန်ဖြစ်သွားကာ ရောင်းဈေးများ အဆမတန် ထိုးကျသွားသည်။
အသန့်ဆုံးစပါး တင်း ၁ဝဝ လျှင် ၂ သိန်း ၈ သောင်း ဈေးနှုန်း ရှိနေချိန် ရေစိုကာ အနည်းငယ်သာ ပျက်စီးသည့် စပါးက ၁ သိန်း ၂ သောင်း ရှိကာ အဝါရောင်ပင် ထွက်လာသည့် ရေစိုစပါးများကိုမူ သောင်းဂဏန်း အနည်းငယ်ဈေးဖြင့် ဖြတ်ဝယ်ကြောင်းနှင့် အများအားဖြင့် ဝယ်ယူသူများ၏ ပါးစပ်ဖျားတွင်သာ ပေါက်ဈေး ရှိနေသည်။
ပြီးခဲ့သည့် မေလ ၂ ရက်နှင့် ၃ ရက်နေ့တွင် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် လေမုန်တိုင်းကြောင့် လယ်သမားအများစု၏ သိုလှောင်စပါးများသည် ရေစိုကာ အရောင်များ ဝါလာပြီး အရည်အသွေး ကျဆင်းလာခြင်း ဖြစ်သည်။
လယ်ဧက ၃ဝ ကျော်ရှိသည့် မြင်းဂကုန်းကျေးရွာမှ လယ်သမားတဦးကတော့ “ဈေးကောင်းရမလား ဆိုပြီး၊ တင်း ၂ဝဝဝ လှောင်ထားမိတာ၊ အများကြီး အရှုံးပေါ်နေတယ်” ဟု ပြောသည်။
လယ်သမားများသည် နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် နွေစပါး (သီးထပ်စပါး) များ ဆုံးရှုံးသွားသည့်အတွက် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ ပြီးခဲ့သည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ ကတည်းက ချေးငှားခဲ့သည့် အကြွေးများကို ယနေ့ထိ ပြန်မဆပ်နိုင်သေးကြောင်း ပြောဆိုကြသည်။
ယခုလို နွေစပါးများ ပျက်စီးသွားကာ ချေးငွေများ ပြန်မဆပ်နိုင်သည့်အတွက် ပုဂ္ဂလိက ငွေချေးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်သူများကလည်း မိုးစပါးအတွက် နောက်ထပ် ချေးငွေများကို ထပ်ချေး မပေးနိုင်တော့ပေ။
နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ် ခံခဲ့ရသည့် ဧရာဝတီတိုင်းမှ လယ်သမားများကို မြန်မာ့လယ်ယာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ အမတော်ကြေး (ခေါ်) တရာသီ တသီးချင်းဆပ် ချေးငွေများကို တဧကလျှင် ကျပ် ၈ဝဝဝ နှုန်းနှင့် ၁၇ ရာခိုင်နှုန်း အတိုးဖြင့် ထုတ်ချေးပေးနေသည်။
ငွေချေးလိုသည့် လယ်သမားတိုင်း မချေးနိုင်ဘဲ ဘဏ်၏ အသင်းဝင်ဖြစ်မှု၊ ချေးငွေကို ပြန်ဆပ်နိုင်သည့် ပိုင်ဆိုင်မှုစွမ်းအား အထောက်အထားများနှင့် ကျေးရွာ ချေးငွေ စိစစ်ရေးအဖွဲ့မှ ဥက္ကဋ္ဌ၏ ထောက်ခံစာဖြင့် ငွေချေးခွင့် ရရှိနိုင်သည်။
လယ် ၁ ဧက စိုက်ပျိုးလျှင် ဓာတ်မြေသြဇာဖိုး အပါအဝင် ကျပ်ငွေ ၁ သိန်း ၈ သောင်းဝန်းကျင် ကုန်ကျသည့်အတွက် မြန်မာ့လယ်ယာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ ချေးငွေထုတ်ပေးမှုသည် လုံလောက်မှု မရှိခြင်းကြောင့် ပုဂ္ဂိလိက လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ ချေးကာ လယ်ယာများ လုပ်ကိုင်နေရကြောင်း ဘိုကလေးမြို့နယ် မြင်းဂကုန်းကျေးရွာ လယ်သမားက ပြောသည်။
လယ်သမားအများစုသည် သိုလှောင်စပါးများကိုသာ ရောင်းချနေရပြီး နွေစပါးစိုက်စဉ်က ယူထားသည့် အကြွေးများကိုသာ ပြန်ဆပ်နိုင်ရန် ကြိုးစားနေရသည်။
ငါးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှု တရားခံများ မမိသေးခြင်းမှာ ရှက်ဖွယ်ကောင်းလှ
အင်္ဂါနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 15 2008 14:09 - မြန်မာစံတော်ချိန်
၃ လကျော် ကြာမြင့်သွားပြီ ဖြစ်သော်လည်း ရန်ကုန်မြို့လယ်တွင် လူ ၅ ဦးကို သေနတ်များဖြင့် သွေးအေးစွာ ပစ်သတ်သွားသည့် ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်သူများကို ယနေ့တိုင် ခုံရုံးမတင်နိုင်သေးသည့်အပြင် လူသေအောင်ပင် နှိပ်စက်စစ်ကြောမှုများ လုပ်ခဲ့ခြင်းအတွက် တာဝန်ရှိသူများကို အရေးယူအပြစ်ပေးမှု ပြုလုပ်ရမှာ ဖြစ်သည်။
မတ်လ ၃ ရက်နေ့က အမှတ် ၁၂၆၊ စိမ်းလဲ့ကန်သာလမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင် မိသားစုဝင် ၄ ဦးနှင့် အိမ်အကူ လုပ်သားတဦးကို နေ့ခင်းကြောင်တောင် သေနတ်များဖြင့် ပစ်သတ်ခဲ့မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ရန်ကုန်မြို့၏ လူကုံထံ ရပ်ကွက်ရှိ အခင်းဖြစ်ပွားရာ နေရာသည် အစောင့်အကြပ် ထူထပ်ပြီး တစိမ်းတရံ မျက်နှာမွဲတဦး ဝင်ရောက် ဖြတ်သန်းရန်ပင် လွယ်ကူလှသည့် နေရာမဟုတ်။
သို့သော် စစ်အစိုးရ၏ လုံခြုံရေး ယန္တရားက အသက် ၆၃ နှစ်ပြည့်သွားပြီ ဖြစ်သည့် နိုဘယ်လ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သူမကို ထောက်ခံသော ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော် ပြသသူတို့ကိုသာ ဖမ်းဆီး ကန့်သတ်ထားရေး အမြဲတစေ အာရုံစိုက်နေရသဖြင့် ရာဇဝတ်ကောင်များ ထူပြော များပြားလာပြီး လက်ရဲဇက်ရဲ ကျူးလွန်မှု သိသာစွာ များပြားလာခဲ့သည်။
မောင်ဝိတ်၊ အောင်ဇော်ရဲမြင့်တို့ အပါအဝင် ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ အနုပညာနယ်ပယ်တွင် ကြောက်မက်ဖွယ် ကောင်းလှအောင် မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲမှု ပြန့်နှံ့နေခြင်းက သက်သေတခု ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် သတင်းစာ လွတ်လပ်ခွင့် ပိတ်ပင်ထားသည့်အတွက် မကောင်းမှုအတွက် ဆိတ်ကွယ်ရာ ဖန်တီးပေး မွေးမြူထားသလို ဖြစ်နေသည်။ ပြည်တွင်းထုတ် ပုဂ္ဂလိက ဂျာနယ်များတွင် လူသတ်မှုခင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခွင့် ရသည်က အမှုဖြစ်ပွားပြီး သီတင်းရက်သတ္တပတ်များ အတော်ကြာမှ ဖြစ်သည်။
အစောပိုင်းက “တရားခံ ရှာပေးရန် အမိန့်နာခံနေသည့် ဝိညာဉ်လေးဦး” ဆိုသည့် သတင်းဆောင်းပါးကြောင့် ဈေးကွက်ကို ဖြန့်ချိမည့် ဆဲဗင်းဒေးနယူးစ် ဂျာနယ်ကို ပိတ်ပင်ကာ အပြစ်ပေးခဲ့သည်။
စိမ်းလဲ့ကန်သာ ငါးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှုဖြစ်ပေါ်ပြီး အနောက်ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့က ခေါ်ယူစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ရာ ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားတဦး စစ်ဆေးနေစဉ် သေဆုံးသွားခဲ့သည်။ ရဲက သေဆုံးသူ၏ မိဘများကို လျော်ကြေးပေး ကြေအေးစေခဲ့သည်။ မိသားစုအနေနှင့် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် မရသလို အာဏာပိုင်တို့၏ လုပ်ရပ်အားလုံး ကောင်းပါသည်သာ လုပ်နေရသည်။
ရဲချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် ခင်ရီ အပြောအရ သေနတ်တလက်ထက် ပိုသုံးထားသည့် ယခုအမှုတွင် ကျည်ဆံများတွင်လည်း ကာကွယ်ရေး စက်လက်နက်ပစ္စည်း စက်ရုံထုတ် ကျည်များလည်း ပါဝင်နေသည်။
စစ်အစိုးရကို ဝေဖန်ရေးသားသော ဘလော့ဂ်ရေးသူကိုပင် စွမ်းစွမ်းတမံ ဖမ်းလေ့ရှိသော် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့များအတွက် လွန်ခဲ့သည့် ၃ လကျော်က ဖြစ်ပွားသော ငါးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှု တရားခံ မမိသည်မှာ ထူးဆန်းလှသည်တော့ မဟုတ်ပါ။ လူ ၁၁ ဦးသေဆုံးပြီး ၁၆၂ ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့သည့် မေ ၇ ရက်၊ ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်က ရန်ကုန်မြို့ နေရာ ၃ နေရာတွင် ဆက်တိုက် ပေါက်ကွဲခဲ့သည့် ဗုံးများအတွက် လက်သည် အစစ်အမှန်ကို ယခုထက်တိုင်ပင် အသေအချာ ဖမ်းဆီးနိုင်မှု မရှိခြင်းက ညံ့ဖျင်းမှုကို မီးမောင်းထိုး ပြနေတော့သည်။
မူဆယ် ၁၀၅ မိုင် ဂိတ်တွင် သစ်ကုန်ကူးသည့် လာဘ်စားမှု သတင်းများထွက်ပေါ်
ကိုစိုး ဇူလိုင် ၁၆၊ ၂၀၀၈
စစ်အစိုးရက သစ်ပြည်ပ တင်ပို့ခွင့် လတ်တလော ရပ်ဆိုင်းထားကြောင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံဘက်သို့ တင်ပို့ရန် ရာနှင့်ချီသော သစ်များ တရုတ်မြန်မာနယ်စပ် မူဆယ်မြို့တွင် စုပုံနေရကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ မူဆယ် ၁၀၅ မိုင် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်အနီး ဘောလုံးကွင်း၌ စုံပုံထားသည့် သစ်များတွင် အစိုးရ သစ်လုပ်ငန်း တံဆိပ် ရိုက်ထားသော ရှမ်းပြည်နယ် လားရှိုး သစ်တောကြိုးဝိုင်းမှ သယ်ယူလာသည့် သစ် များ လည်း ပါဝင်သည်ဟု မူဆယ်ဒေသခံ တဦးက ပြောသည်။
“အဲဒီ ဘောလုံးကွင်းထဲမှာ အစိုးရ သစ်ကားတွေရပ်ထားတာ လ အတော်ကြာပြီ၊ အစိုးရက အခု သစ်တွေပြည်ပပို့တာ ရပ်ခိုင်းထားတယ်တဲ့၊ ဒါကြောင့် တရုတ်ဘက် ပို့မယ့် သစ်တွေ ဒီမှာ စုပုံနေတာ”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ယခု မူဆယ်တွင် စုပုံထားသော သစ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး(နစက) တာဝန်ရှိသူများကို စုံစမ်းစစ်ဆေး မှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း မူဆယ် ကုန်သည်စီးပွားရေး အသိုင်းအ၀န်းက ပြောဆိုသည်။
“ဒီက သစ်ရောင်းဝယ်တင်ပို့တာတွေကို စစ်ဒေသကနေက ကိုင်တာ၊ ဒါပေမယ့် စစ်တပ်ကရော တိုင်းရင်းသား အပစ်ရပ် အဖွဲ့တွေပါ တန်ဖိုးရှိတဲ့ သစ်နဲ့ သစ်တောထွက် ပစ္စည်းတွေအားလုံး တရုတ်ကို ထုတ်ရောင်းနေ ကြ တာ”ဟု တရုတ်မြန်မာ နယ်စပ်မှ ဒေသခံတဦး ကလည်း ပြောသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၌ လာမည့်သြဂုတ်လအတွင်းကျင်းပမည့် အိုလံပစ်အားကစားပွဲတော်တွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သော သစ်အမြောက်အများကို မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ တင်သွင်းနေကြောင်းလည်း အတည်မပြုနိုင်သေးသော သတင်းများအရ သိရသည်။
“အိုလံပစ် အခမ်းအနားမှာပြင်ဆင် အသုံးပြုဖို့ သစ်တွေကိုဝယ်ဖို့အတွက် တရုတ်ကုန်သည်တွေက ၁၀၅ မိုင်ဂိတ်က အဲဒီ သစ်တွေ ရှာပေးနိုင်မယ့် ၀န်ထမ်းတွေကို အပူတပြင်း လာရှာကြတာရှိတယ်”ဟု မူဆယ်ကုန်သည်တဦးက ပြောသည်။
တရုတ်ကုမ္ပဏီများအနေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ သစ်များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ၀ယ်ယူရောင်းချလျက်ရှိရာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်က စစ်အစိုးရအပါအ၀င် တိုင်းရင်းသား အပစ်ရပ်အဖွဲ့များက တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ရောင်းချသည့် တရား မ၀င်သစ် ကုဗမီတာ ၁.၅ သန်းခန့်ရှိပြီး ယင်းသစ်များမှာ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်သို့ ရောက်ရှိ သွားကြောင်းလည်း Global Witness အဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန် ချက်တွင်ပါရှိသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ သစ်များကို အများဆုံးဝယ်ယူသည့်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ်က ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်းမှ တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ်သို့ ပြည်ပတင်ပို့သစ် ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိ ကုဗမီတာ ၁ သန်း ခန့် ရှိသော တရား မ၀င်သစ်များ တင်ပို့ခဲ့ကြောင်း လန်ဒန်မြို့ အခြေစိုက် Global Witness အဖွဲ့က ဆိုသည်။
တချိန်တည်းတွင်ပင် ယခုဇူလိုင်လ အတွင်း၌ ယင်းမူဆယ် ၁၀၅ မိုင်ဂိတ် တာဝန်ကျ အကောက်ခွန် ၀န်ထမ်းများ နှင့် နစက ၀န်ထမ်းများကို လာဘ်စားမှု၊ တရားမ၀င် ကုန်ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုများဖြင့် စစ်ဆး အရေးယူမှုများ ရှိကြောင်း တရုတ်မြန်မာ နယ်စပ်မှ လာသောသတင်းများအရ သိရသည်။
“သူတို့ကို နာဂစ် အကူပစ္စည်းတွေတင်လာတဲ့ ကားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လာဘ်စားတယ်ဆိုပြီးတော့လည်း စွပ်စွဲ ထားတာ”ဟု ၁၀၅ မိုင်ဂိတ် ရုံးနှင့် နီးစပ်သူ တဦး ကပြောသည်။
တရုတ်မြန်မာ နယ်စပ် ကုန်သည်များက နာဂစ် ဒုက္ခသည်များအတွက် လှူဒါန်းသော အကူပစ္စည်းတချို့ သယ်ဆောင်သည့် လမ်း၌ပင် ပျောက်ဆုံးမှုများ ရှိသည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
အောင်သက်ဝိုင်း/ လပွတ္တာ ဇူလိုင် ၁၆၊ ၂၀၀၈
ကျနော် အခု လပွတ္တာက ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း အင်တာနက်ဆိုင်ကိုတန်းဝင်လာတာပါ။ အခြေအနေတွေက အစိုးရပြော သလို လုံးဝမဟုတ်ဘူးဗျ။ တော်တော်ကို ဆိုးတယ်။ အရင်တုန်းက ဒုက္ခသည်တွေက စခန်းတွေမှာ ဒုက္ခခံရတယ်။ အခု ကိုယ့်နေရာကိုယ်ပြန်ပြီး ဒုက္ခခံရတယ်။ ကိုင်းသောင်၊ ကညင်ကုန်း၊ ရွေး၊ ပြင်စလူ ရွာတွေရောက်ခဲ့တယ်။ ပြန်လည်ထူထောင် ရေးအတွက်ဆိုပြီး လုပ်အားဝင်ပေးခိုင်းတာ အကြီးအကျယ်ပဲ။
“မင်းတို့ ရပ်ရွာတွေ ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ ငါတို့စစ်သားတွေက ရောက်လာတာ။ မင်းတို့တတွေ ငါတို့နဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်” ဆိုပြီး လုပ်အားပေးခိုင်းတာပဲ။ ရိုက်တာ၊ နှက်တာတွေလည်း ရှိတယ်။ ၃မိုင်၊ ၅မိုင်နဲ့ ရတနာဒီပ ကစားကွင်းက နေရပ်မပြန်သေးတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေအများကြီး လုပ်အားပေးအခိုင်းခံနေရတယ်။ သူတို့က လုံးဝမပြန်ချင်ကြဘူး။ လုပ်အားပေးမလိုက်ရင် စခန်းက မောင်းထုတ်မယ်ဆိုလို့သာ လုပ်အားပေး လိုက်ကြရတာ။ စခန်းတွေကို သြဂုတ် ၅ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး ဖျက်မယ်၊ မပြန်ရင် အကြမ်းဖက်မယ်လို့သတိပေးထားတယ်။
ကုလသမဂ္ဂကို သိပ်အထင်မကြီးနဲ့ဗျို့။ သူတို့တွေက လူထုနဲ့တသားတည်းမဖြစ်ဘူး။ ဒေါ်လာရလို့ အလုပ်လာလုပ်နေကြတာ။ ဒုက္ခသည်တွေ အရမ်းအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သိတာတောင် သတင်းမထုတ်ပြန်ပေးကြဘူး။ အစိုးရငြိုငြင်မှာ အရမ်း ကြောက်နေကြတယ်။ သူတို့တွေက အခြေအနေကို အမြဲထိတွေ့နေရတာ။ သိတယ်။ သူတို့ရဲ့ဒေါ်လာရနေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ရပ်သွားမှာစိုးလို့ သိရဲ့သားနဲ့ မသိလိုက် မသိဘာသာ မျက်လုံးစုံမှိတ်နေကြတာ။
သူတို့အတွက်သုံးနေတဲ့ စရိတ်တွေက ဒုက္ခသည်တွေကို ထောက်ပံ့နေတဲ့စရိတ်ထက် များမယ်လို့ ထင်တယ်။ အိမ်အကောင်း စားတွေကို တလ ကျပ် ၁၀ သိန်း နဲ့ ၁၅ သိန်းအကြားပေးပြီး ငှားနေကြတယ်။ တကယ်လို့သာ သူတို့တွေ စေတနာရှိရင် အသုံးစရိတ်ကို လျှော့ချပြီး ဒုက္ခသည်တွေအတွက် သုံးငွေ အပိုထွက်လာအောင် လုပ်သင့်တာပေါ့ဗျာ။ ပြီးတော့ သူတို့တွေက ၀တ်ကျေတန်းကျေဗျ။ လူမှုရေးစိတ်ဓာတ်အရင်းခံပြီး လာလုပ်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ တော်တော်စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းတယ်။
အခု ထပ်တောင်းတဲ့ ဒေါ်လာ သန်း ၂၈၀ ဆိုတာ သူတို့အတွက်ပဲ နေမှာပေါ့။ ဒုက္ခသည်တွေကတော့ တာပေါ်လင်စကို အမိုး အကာလုပ်၊ ၀ါးလုံးနဲ့ တဲထိုး၊ WFP က မသေရုံပေးတဲ့ ဧည့်မထ ဆန်ညံ့ကို စားနေရတာ။ မိုးလေးရွာနေလို့ ဒုက္ခသည်တွေ အတွက် ရေအဆင်ပြေနေတာ။ မိုးသာမရွာရင်တော့ ဖြစ်လိုက်မယ့်ကပ်ရောဂါတွေ။ ဆေးကုသမှုအပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း အဲဒီ အန်ဂျီအိုတွေ မရောက်သေးတဲ့ နေရာတွေ အများကြီး ရှိသေးတယ်။ အဓိက ပြောချင်တာကတော့ ဒုက္ခသည်တွေမှာ အားကိုးရာမရှိဘူး။
ကျနော်ရောက်သွားတဲ့ ရွာတွေက ဒုက္ခသည်တွေက ကျနော့်ကိုတိုင်ကြတယ်။ သူတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခြေအနေတွေကိုပေါ့။ သူတို့စိတ်ထဲမှာ ကျနော်က သူတို့ကို တခုခုဖြစ်အောင် ကူညီပေးနိုင်မယ်ဆိုပြီး မျှော်လင့်နေကြတယ်။ အဲဒါ ကျနော် ၀မ်းအနည်းဆုံးပဲ။ ကျနော်က သူတို့အတွက် သတင်းရေးပေးရုံကလွဲရင် ဘာဆိုဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူးဗျ။ ကျနော်ရေးတဲ့ သတင်းတွေက သူတို့တွေကို မကယ်တင်နိုင်ဘူးဆိုတာ ကျနော်ကိုယ်တိုင် သိတယ်။
ကမ္ဘာက သိမယ်၊ နိုင်ငံတကာက သိမယ်၊ ဒါလောက်ပဲ။ အဲဒါအကုန်ပဲ။ ကုလသမဂ္ဂဆိုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကြီး တွေတောင် လပွတ္တာ မြို့ပေါ်မှာရှိနေပြီး ဒီဒုက္ခသည်တွေကို မကူညီနိုင်တာ ကျနော်လို သတင်းထောက် တယောက်က ဘာကူညီနိုင် မှာလဲ။ ကျနော့်အတွက်တော့ သတင်းကောင်းတွေ ရမယ်၊ လူတွေဖတ်ကြမယ်၊ အရေးကောင်းရင် ချီးကျူးကြမယ်၊ ဒါပဲ။ လာမယ့် ဇူလိုင်လကုန်ဆိုရင် ၃ မိုင်၊ ၅မိုင်၊ ရတနာဒီပက လူတွေကို ဆွဲထုတ်မယ်။ တဲတွေဖျက်မယ်။ နှင်မယ်။ ပြောမရရင် ရိုက်ကောင်းရိုက်မယ်။
ဟိုးအရင် လပွတ္တာမြို့ပေါ်က ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကနေ ဒုက္ခသည်တွေကို ၃ မိုင်၊ ၅မိုင်နဲ့ ရတနာဒီပ စခန်းတွေကို ပို့တုန်းက ဘယ်လို ပို့ခဲ့တယ်ထင်လဲ။ ဘုရားကြီးဝင်းနဲ့ မြို့ပေါ်စခန်းက လူတွေကိုညနေ ၄ နာရီလောက် လပွတ္တာ မြို့မှာတပ်စွဲထားတဲ့ တပ်မ ၆၆ က စစ်သားတွေက နံပါတ်တုတ်တွေ သေနတ်တွေကိုင်၊ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို ၀ိုင်း၊ ပြီးတော့ ကားကြီးတွေပေါ် ကို ကျွဲနွားတွေလို မောင်းတင်ခဲ့တာဗျ။ အဲဒါ အခုမှ ဒုက္ခသည်တွေက ကျနော့်ကို ပြောပြတာ။ သူတို့အဲဒီလို ထပ်လုပ်ခံရမှာ ကြောက်နေကြတယ်။
အဲဒီလို ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို အင်အားသုံးရွှေ့တာ ကုလသမဂ္ဂက မြန်မာဝန်ထမ်းတွေသိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ သတင်းမထုတ် ခဲ့ကြတာလဲ။ အဲဒီဖြစ်ရပ်ကို မြို့ခံတွေအားလုံးလည်းသိတယ်။ အခုနောက်တကြိမ် အဲဒီလို ဖြစ်ဦးမယ်။ ပြီးတော့ စခန်းကို တာဝန်ယူထားတဲ့တပ်နဲ့ အာဏာပိုင်တွေက ညနေ အရက်မူးလာရင် “သူများ ထမင်းစားပြီး အပျင်းတက်နေတဲ့ ဟာတွေ၊ သူတောင်းစားတွေ၊ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ် ပြန်ကြပါလား” ဆိုပြီး ဆဲတယ်။ အဲဒါ မခံနိုင်တဲ့ ဒုက္ခသည်မိသားစုတွေက၊ အထူးသဖြင့် ယောက်ျားတွေက ပြန်အော်ရင် ခေါ်ပြီးရိုက်၊ ပြီးတော့ အဲဒီမိသားစုကို စခန်းက မောင်းထုတ်တယ်။ အဲဒါ တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန် တွေ။ စခန်း ၃ ခုစလုံးမှာ ဖြစ်နေတာ။ ပြီးတော့ အလှူရှင်တွေလာရင် ဘာမှ မလိုအပ်ဘူးဆိုပြီး ပြောခိုင်းတယ်။ အရမ်းလှူချင် တဲ့သူတွေက ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ အကြာကြီး စကားတွေပြောပြီးမှ လှူလို့ ရတယ်။ အဲဒီအခြေအနေတွေကို ကုလသမဂ္ဂ သိမှာပါ။ ဒါပေမယ့်သူတို့ ဘာကြောင့် နှုတ်ဆိတ်နေကြတာလဲ ...။
ပြီးတော့လည်း TCG (အာဆီယံ၊ ကုလသမဂ္ဂ၊ နအဖ … သုံးပွင့်ဆိုင် ဗဟိုအဖွဲ့) ဘာတွေ ဘယ်လို စာရင်းကောက် သွားတယ် မသိဘူးလို့ လပွတ္တာ မြို့ခံတွေက ပြောတယ်။ လူငယ်လေးတွေ လာတယ်တဲ့။ သူတို့က အာဆီယံ ... ဘာဘာ ညာညာ အဖွဲ့ ကပါပေါ့။ ရွာတွေမှာ ဘာတွေ ဖြစ်နေလဲသိချင်တယ်ဆိုပြီး လပွတ္တာမြို့ပေါ်မှာနေတဲ့ ရယကကို မရမက မေးတယ်။ ဟိုက ကျနော်တို့ အရမ်းကြီးမသိဘူး။ ရွာကို လိုက်ပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးပြောတော့ အချိန်မရလို့ပါ၊ မြန်မြန်နဲ့ ခန့်မှန်းပြောပါဆိုပြီး စာရင်း တွေကောက်သွားလေရဲ့။ အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ပြီး စာရင်းအမှန် ထွက်မလဲ။ ကျနော့်မှာ လူသက်သေတွေ၊ အထောက်အထား တွေအများကြီးရှိတယ်။ စာရင်းတွေကို အပေါ်ယံ လုပ်သွားကြတာလေ။ အဲဒါ TGC ပေါ့။ အဲဒီ အစီရင်ခံစာက အခြေအနေမှန် ကို လုံးဝထင်ဟပ်မပြနိုင်တာ သေချာပေါက်ပဲ။
ပြီးတော့ အစိုးရနဲ့ VOA နဲ့ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ လေဆင်နှာမောင်းကိစ္စ။ အစိုးရက လေဆင်နှာမောင်း မတိုက်ဘူး။ VOA ကတိုက်တယ် ဆိုပြီး ဖြစ်ခဲ့တာ။ တကယ်တော့ တိုက်ခဲ့တယ်။ လပွတ္တာမြို့ ၃ မိုင် နားက ရွာတွေမှာ အိမ်တွေ အလုံးလိုက်ကို ကျွတ်ထွက် တာ။ သို့သော် VOA က ပြောတဲ့နေရာ လွဲသွားတာ။ အဲဒါ အစိုးရက ချက်ကောင်းရပြီဆိုပြီး ကိုင်လိုက်တာဗျ။
နောက်တခုက အစိုးရ ပြောနေတဲ့ လယ်ထွန်စက်တွေ ပေးနေတယ်။ မျိူးစပါးတွေ ပေးနေတယ်။ လှေတွေ၊ ပိုက်တွေပေးနေ တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စ။ ရွာက လူတွေက ကျနော့်ကို ဘာပြောလဲသိလား။ မင်းက အစိုးရဘက်ကလားတဲ့။ သူတို့ဘာမှမရဘူးတဲ့။ ရတဲ့ရွာတွေတော့ ရှိတယ်တဲ့။ ဟုတ်တယ်။ ရတဲ့ရွာတွေရှိတယ်။ သို့သော် စက်အစုတ်။ လယ်တဧကကို ဒီဇယ်ဆီ ၂ ဂါလန် ပေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီစက်အစုတ်တွေက ပျက်တယ်။ ပြီးတော့ ဆီအရမ်းစားတယ်။ တဧက ထွန်ဖို့ ၄ ဂါလံနဲ့ ၅ ဂါလံ ကုန်တယ်တဲ့။ ပြီးတော့ စက် ၁၀ လုံးမှာ ၃ လုံးလောက်ပဲ ကောင်းတယ်တဲ့။ အဲဒီကောင်းတဲ့ ၃ လုံးကို ကိုယ့်လယ်မှာ ထွန်နိုင် ဖို့ ရွာလူကြီးကို ၂ သိန်းလာဘ်ထိုးရတယ်။ ပြီးတော့ ပေးတာက အသုံးမကျတဲ့စပါး၊ နှံကား ဆိုတာ။ သူက ဆန်နာမည်ဆိုရင် မနောသုခပေါ့။ ကျဲလိုက်တယ်။ တပင်မှ မပေါက်ဘူး။ သူတို့အရင်ကစိုက်တဲ့ မျိူးစပါးကလည်း လုံးဝမရတော့ လယ်သမား တွေ ပက်လက်လန်ရော။
စပါးပင်မရှိတဲ့လယ်ကွင်းတွေကို မြစ်ကမ်းတလျှောက်မှာမြင်ခဲ့တယ်။ အစိုးရ လိမ်တာတွေကတော့ အံ့ရောပဲ။ စပါးပင်ရှိတဲ့ လယ်ကွင်းတွေကိုတော့ လပွတ္တာမြို့အ၀င် လမ်းတလျှောက်မှာပဲ တွေ့ခဲ့ရတယ်။ ဒါက မုန်တိုင်းသင့် ဧရိယာ တခုလုံးနဲ့ နှိုင်းရင် ဘာမှ မဟုတ်ဘူးနော်။ တကယ့်ကို ရင်မောစရာပဲ။
ဒုက္ခသည်တွေကြောင့် ဒုက္ခသည်စခန်းကို အုပ်ချူပ်တဲ့ လူကြီးမင်းတွေနဲ့ မြို့ရဲ့ ရယက၊ မရက ဆွေတော်၊ မျိုးတော်၊ လပွတ္တာ မြို့ခံ အိမ်ပိုင်ရှင်တွေ အတော့်ကို ချမ်းသာလာကြပြီ။ စားသောက်ဆိုင်တွေဆိုတာ ကြက်ပျံမကျ။ ပြီးတော့ လပွတ္တာမှာ UN က မမတွေ၊ ကိုကိုတွေ၊ ဦးကြီးတွေ၊ တခြား INGO က ကိုကို၊ မမ၊ ဦးကြီးတွေရဲ့ ချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတွေကတော့ ဒေါ်လာငွေ ရာချီပေးငှားထားတဲ့ အိမ်ကြီး အိမ်ကောင်းတွေပေါ်မှာ ရှိလာပြီ။
ဒုက္ခသည်တွေကို လျစ်လျူရှုတဲ့သူတို့ကို ကျနော်တကယ်မုန်းတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာမှမသိရှာလေတဲ့ ဒုက္ခသည် အများစုက တော့ UN နဲ့ INGO က ကျပ်ငွေ သောင်းဂဏန်းနဲ့ ဆန်လေးတွေပေးတာကို ကယ်တင်ရှင်ကြီးတွေအလား ထင်မှတ်ယူဆ ကိုးကွယ်နေကြတယ်ဗျ။ ဆရာမ၊ ဆရာဆိုပြီး လေးလေးစားစား ရိုရိုသေသေ အောက်ကျို့ ဆက်ဆံနေကြတယ်။ အေးပေါ့ လေ။ အစိုးရက လုပ်မပေးတာထက်စာရင် သူတို့ကလုပ်ပေးနေတော့ ကယ်တင်ရှင်ကြီးတွေလို့ ထင်နေတာ သိပ်တော့ မဆန်းပါဘူး။ ကျနော်ကတော့ သူတို့ကို ဆောရီးပဲ။ အပြောကတော့ ရွှေမန်းတင်မောင်၊ အကကတော့ ချိုမိုင်မိုင်ဆိုတာတွေ။
အရင် ခရီးစဉ်တုန်းက ဒုက္ခသည်တွေကို သနားစိတ်၊ ဒီUN နဲ့ INGO တွေကို မုန်းတဲ့စိတ်နဲ့ ပြန်ခဲ့ရတယ်။ အခု ခရီးစဉ်လည်း ဒီလိုပဲ၊ နောက်ခရီးစဉ်လည်း ဒီလိုပဲလာဦးမှာပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ သူတို့တွေက လူစိတ်မရှိတဲ့သူတွေ ဖြစ်နေလို့ပါ။ အိုကေ။ ကျနော်ပြောတာတွေ စိတ်ရှည်လက်ရှည် နားထောင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ ရင်ထဲမှာ တော်တော်လေး ပေါ့သွားပြီ။
နာဂစ်ရန်ပုံငွေ ကာတွန်းပြပွဲ ကျင်းပမည်
အေးချမ်းမြေ့ ဇူလိုင် ၁၆၊ ၂၀၀၈
ပန်းဆိုးတန်းလောကနတ် အနုပညာပြခန်းတွင် လာမည့် ဇူလိုင် ၂၂ ရက်နေ့၌ နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသော ဒုက္ခသည်များကို လှူဒါန်းမည့် ရန်ပုံငွေ ကာတွန်းပြပွဲ ကျင်းပမည် ဖြစ်ကြောင်း ပွဲစီစဉ်သူထံမှသိရသည်။
“မြန်မာပြည်မှာ ရှိရှိသမျှ ကာတွန်းဆရာတွေဆီကို စာပို့ထားပါတယ်။ အားလုံး အယောက် ကျော်တယ်” ဟု ၎င်း ပွဲစီစဉ်သူက ပြောသည်။
ကာတွန်းဆရာတဦးလျင် ကာတွန်းပုံ အများဆုံး ၃ ပုံတင်သွင်းနိုင်ပြီး ဈေးနှုန်းကို ကာယကံရှင် ကာတွန်းဆရာကိုယ်တိုင် ကြိုက်သည့် နှုန်းထား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ကာ ရောင်းချရရှိသည့် ငွေကို နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသည့် ဒုက္ခသည်များအား လှူဒါန်းမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“တခြားကာတွန်းပြပွဲတွေလိုပဲ ကာတွန်းဆရာတွေက ပွဲမှာအလှည့်နဲ့ထိုင်မယ်။ ပြီးရင် ရောင်းထားတဲ့ကတ်တလောက်တွေမှာ ကာတွန်းပုံလေးတွေ ရေးပေးမယ်။ ကာတွန်းဆရာက လက်မှတ်ထိုးမယ်” ဟု ပွဲစီစဉ်သူတဦးက ပြောပြသည်။
ဆက်လက်၍ ၎င်းက နာဂစ်ရန်ပုံငွေ ပန်းချီပြပွဲမှာ အလွန်အောင်မြင်လူကြိုက်များခဲ့ပြီး ယခု ပြုလုပ်မည့် ကာတွန်းပြပွဲအတွက် ကာတွန်းဆရာများအားလုံး စိတ်ဝင်တစား တက်ကြွ လျှက် ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
လူငယ်ကာတွန်းဆရာတဦးကလည်း “ဒီပွဲကို ပါဝင်ဖြစ်အောင်ပါဝင်မှာပါ။ ကျနော်ခုထိ ပုံတွေမပေးရသေးပေမယ့် အဆင်သင့် ရေးထားပြီးပါပြီ။ နာဂစ်ရန်ပုံငွေပွဲမှာ ပါဝင်ခွင့်ရလို့ ကျနော် ဝမ်းသာတယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ပြောကြားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့တွင်ရောက်ရှိနေသော ကာတွန်း နေမျိုးအေးက ယခုကဲ့သို့ ကာတွန်းဆရာများ စုပေါင်း၍ မုန်တိုင်း သင့်ပြည်သူများကို ကူညီမည်ဆိုသည့်သတင်းကြားရသောကြောင့် ဂုဏ်ယူ ဝမ်းမြောက်သော်လည်း ကာတွန်းဆရာတဦး အနေနှင့် ပါဝင်ခွင့်မရနိုင်သည့်အတွက် ဝမ်းနည်းမိသည်ဟု ပြောသည်။
ယခုပြုလုပ်မည့်ကာတွန်းပြပွဲကို ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက် အီကိုဗစ်ရှင်းဂျာနယ်မှ တာဝန်ယူစီစဉ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပွဲမစမီ ကာတွန်း ပုံများကို စိစစ်ရေးသို့ တင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး ကာတွန်း ပုံပေါင်း ၄၀၀ ကျော်အနက် ပုံမည်မျှ ကျန်ရှိမည်ကို မပြောနိုင်သေး ကြောင်း ပွဲစီစဉ်သူ ကပြောသည်။
“အိုလံပစ် အခမ်းအနားမှာပြင်ဆင် အသုံးပြုဖို့ သစ်တွေကိုဝယ်ဖို့အတွက် တရုတ်ကုန်သည်တွေက ၁၀၅ မိုင်ဂိတ်က အဲဒီ သစ်တွေရှာပေးနိုင်မယ့် ၀န်ထမ်းတွေကို အပူတပြင်း လာရှာကြတာရှိတယ်”ဟု မူဆယ်ကုန်သည်တဦးက ပြောသည်။
တရုတ်မြန်မာ နယ်စပ် ကုန်သည်များက နာဂစ် ဒုက္ခသည်များအတွက် လှူဒါန်းသော အကူပစ္စည်းတချို့ သယ်ဆောင်သည့် လမ်း၌ပင်ပျောက်ဆုံးမှုများ ရှိသည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
ဒေးဗစ် စကော့ မက်သီဆင် ဇူလိုင် ၁၆၊ ၂၀၀၈
ဂျပန် ပညာရှင်တဦး၏ လေ့လာမှုက စစ်အစိုးရ၏ ဗြူရိုကရေစီ ထိန်းချုပ်မှုများ အောက်မှနေ၍ စိုက်ပျိုးရေး ဈေးကွက်တခု ဖြစ်ထွန်းလာရန် မည်သို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပုံကို ဖော်ပြထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း စီးပွားရေးမညီမျှမှု (Economic Disparity in Rural Myanmar) စာအုပ်။ရေးသူ Ikuko Okamoto.
National University of Singapore Press, 2008.
စာမျက်နှာ ၂၆၄ မျက်နှာ
နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရမှုနှင့် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာဈေး တရိပ်ရိပ် မြင့်တက်လာနေမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် ပို၍ ဖိအားများ သက်ရောက်လာရန် အကြောင်းရှိနေသည်။
မြန်မာ နိုင်ငံက အတိတ်တချိန်တွင် ကမ္ဘာသို့ ဆန်အများဆုံးတင်ပို့ရောင်းချသည့် နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ပြီး အာရှတိုက်၏ အဓိက စိုက်ပျိုးရေး ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ရာ အထူးထင်ရှားသည့် နိုင်ငံလည်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏လုပ်သားအများစုမှာ လယ်ယာကဏ္ဍတွင်ပင် လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရေးသည် တနိုင်ငံလုံးအတွက် အဓိကဦးစားပေး လုပ်ငန်းတခု ဖြစ်နေရုံမျှမက စစ်အစိုးရအတွက် အရေးကြီးသည့် ကဏ္ဍလည်း ဖြစ် သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရအဆက်ဆက်က လယ်ယာကဏ္ဍထွက်ကုန် တိုးတက်ရေး အတွက် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး ဖြင့် ကြံဆကြိုး ပမ်း ခဲ့ကြပြီး ပထမပိုင်းတွင် ဆုတ်ယုတ်မှုများရှိခဲ့သည့် ဆိုရှယ်လစ်မူဝါဒများ၊ ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းမှစ၍ တဖြည်းဖြည်း စီးပွား ရေး တံခါးဖွင့်သည့် ပုံစံဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ တို့ကို စမ်းသပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသည်။ မည်သို့ဆောင်ရွက် စေကာမူ လယ်ယာ ကဏ္ဍ တိုးတက်လာစေမည်ဟု ကတိက၀တ်အတိုင်း မဖြည့်ဆည်းနိုင်ရုံသာမက ဆက်လက် ကြပ်တည်း စွာ ရုန်းကန် နေကြရဆဲ ဖြစ်သည်။
အီကူကို အိုကာမိုတို (Ikuko Okamoto) ရေးသားသည့် စာအုပ်တွင် ယခု နိုင်ငံတော် ကျရှုံးကိန်းဖြစ်နေရပုံအား အများသူငါ ပြောဆိုနေကြသည့် ၀မ်းနည်းဖွယ် ဖြစ်ရပ်အကြောင်းစုံအနက်မှ အောင်မြင်မှုဖြစ်ရပ်တခုကို လေ့လာဖော်ပြထားခဲ့သည်။
အီကူကို အိုကာမိုတို ၏ “မြန်မာနိုင်ငံတွင်း စီးပွားရေးမညီမျှမှု” (Economic Disparity in Rural Myanmar) အမည်ရှိ ယခု စာအုပ်တွင် ရန်ကုန်အနီးရှိ မြို့နယ်တခုတွင် ပဲအထွက် အလျှင်အမြန်တိုးတက်လာပုံကို စနစ်တကျသုတေသနပြု၍ ပညာ ရှင် ဆန်ဆန် အကဲဖြတ် တင်ပြထားသည်။ ပဲတမျိုးဖြစ်သည့် ပဲတီရွှေဝါ (golden green gram သို့မဟုတ် မမ်ပဲ mung bean) စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်ပုံအကြောင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လယ်လုပ်သားများ၊ ကျေးလက်နေ ကုန်သည်များ၊ လယ်ထွန်စက်ရောင်းသူများ၊ တချို့သော မြေယာပိုင်ဆိုင် မှု နှင့် ဆန်စပါး လုပ်ငန်းများတို့အကြား ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ဆက်ဆံရေးစနစ်ကို အနီးကပ်လေ့လာထားခြင်းဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ဆန် ဈေးကွက်တွင် မထင်မှတ်ဘဲ အခြေအနေပေးလာမှုအရ ယခင်က မရှိခဲ့သည့် ပဲဈေးကွက်ဖြစ်ထွန်းလာပုံ အကြောင်းကို လည်းတင်ပြထားသည်။ စိတ်ထိခိုက်ဖွယ် အကောင်းဆုံးအချက်မှာ ဤပဲလုပ်ငန်းမှ အကျိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်းလာကြ သော် လည်း အောက်ခြေအလွှာရှိ လူများစု၊ အထူးသဖြင့် လယ်သမားများနှင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်သားများမှာ သူတို့၏ ထုတ်လုပ်မှု အတွက် အကျိုးအမြတ်အနည်းဆုံး ခံစားရရှိသူများ ဖြစ်နေကြခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ပဲမျိုးစုံရောင်းချမှုမှရငွေ စုစုပေါင်း ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ကျပ် ၃. ၆ ကုဋေ (အမေရိကန်ဒေါ်လာအားဖြင့် ၃ သန်းခန့်) ရရှိခဲ့ပြီး အဓိကအားဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ တင်ပို့ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံက ပဲစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု လျှော့ချခဲ့ပြီး ဤလိုအပ်ချက် အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှ လယ်သမားများနှင့် ကုန်သည်များကို ဖြည့်ဆည်းစေခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လေ့လာရေးဌာနမှ သုတေသီ အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်သူ အိုကာမိုတိုသည် ရန်ကုန်မြို့ အရှေ့ပိုင်းရှိ သုံးခွမြို့နယ်တွင် နှစ်အတန်ကြာနေထိုင်၍ ယခုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုများအကြောင်းကို လေ့လာခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ သုံးခွ မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာပေါင်း ၆၄ ရွာနှင့် လူဦးရေ တသိန်းခွဲကျော်နေထိုင်နေသည်။
သူက ဤပဲတီရွှေဝါထုတ်လုပ်မှုတွင် အလျှင်အမြန် တိုးတက်လာပုံနှင့် နိုင်ငံခြားတင်ပို့ရာတွင် အောင်မြင်မှု ရခဲ့ပုံ တို့ကို စနစ်တကျ အသေးစိတ် လေ့လာခဲ့သည်။
"အခုလို တိုးတက်လာတာဟာ အစိုးရရဲ့ ပဲတိုးတက်ထုတ်လုပ်ရေး မူဝါဒတွေနဲ့ လုံးဝ မဆိုင်ပါဘူး။ ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက် ရေးအတွက်လည်း အတင်းအဓမ္မ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေ မရှိပါဘူး”ဟု လည်း သူမ၏ စာအုပ်တွင် ဖော်ပြရေးသားခဲ့သည်။
အရိုးရှင်းဆုံးအကြောင်းမှာ အစိုးရက အကန့် အသတ်ဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဆောင်ရွက်လာသည့်အပေါ် ရနိုင်သမျှ သော အခွင့်အရေးနေရာ၌ ရန်ကုန်အခြေစိုက် ကုန်သည်များက နိုင်ငံခြားတင်ပို့နိုင်သည့် သီးနှံများ စိုက်ပျိုးစေခဲ့ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သည့် နှစ် ၂၀ အတွင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပဲတီရွှေဝါ ထုတ်လုပ်ရေး၌ သုံးခွက စံပြသဖွယ် ဖြစ်ခဲ့သည်။ (စစ်အစိုးရက အမျိုးသား အသားတင်ထုတ်လုပ် မှုတန်ဖိုး (ဂျီဒီပီ) တိုးတက်စေမှုအတွက် သုံးခွမြို့ကို ထူးချွန်သည့် မြို့နယ်ဆု ၂၀၀၆ ခုနှစ် တွင် ပေးအပ်ခဲ့သည်)
၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် ပဲတင်ပို့နိုင်မှု လုံးဝမရှိခဲ့ရာမှ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် တန်ချိန် ၁၅,၀၀၀၊ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် တန်ချိန် ၂၀၇,၀၀၀ သို့ တိုးတက် တင်ပို့နိုင်ခဲ့သည်။ သုံးခွအတွင်း ပဲစိုက်ပျိုးမှု ဧကမှာလည်း ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် ၂၄၈ ဧကမှ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် ၉၅,၀၀၀ ဧကသို့ တိုးတက်လာခဲ့သည်။
ဤဖြစ်စဉ်တွင် သုံးခွမြို့မှ လူနည်းစုသည်သာ လူနေမှုအဆင့်အတန်း တိုးတက်လာစေခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် လယ်ထွန် စက်ဝယ်ရန် ချေးငွေရရှိနိုင်ကြသည့် လယ်ထွန်စက် ငှားရန် အခွင့်ရှိသူများသာ တိုးတက်ခဲ့ကြသည်။ လယ်ထွန်စက်ငှားသူ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကလည်း အလုပ်ဖြစ်ကြသည်။
အလားတူ အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ပဲတင်ပို့သည့် ကုန်သည်များကလည်း အမြတ်အစွန်း ရနိုင်ခဲ့ကြသည်။ မြေပိုင်မရှိသည့် လယ်ကူ လီလုပ်သားများက ချေးငွေမရနိုင်ကြသလို ဆင်းရဲသူ လယ်သမား အဖြစ်သာ ဆက်လက်ကျန်ရှိနေကြရသည်။ ဤအချက် သည် ရှားရှားပါးပါးကိစ္စ ဖြစ်သလို မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုတွင် အထူးအရေးတကြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်နေသည့် အချက်လည်း ဖြစ်သည်။
ဤဒေသတွင် ၀င်ငွေမညီမျှမှု အဓိက အကြောင်းမှာ အများစုသော လယ်လုပ်သားထုကြီးကြောင့် ဖြစ်ပြီး ဤ ၀င်ငွေနည်း လူများစုသည် မူလကတည်းက ဆင်းရဲမွဲတေနေကြသူများ ဖြစ်ကြသည်။ လုပ်အား သိပ်မလိုအပ်သည့် ပဲစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းမှလည်း သူတို့က ၀င်ငွေအနည်းအကျဉ်းသာ ရရှိကြသည်။
အစိုးရက လျစ်လျူရှုထားမှုကို စာရေးသူက ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့် တိတိကျကျ ထောက်ပြ၍ ဝေဖန်ခဲ့သည်။ ဤပဲတီရွှေဝါ ထုတ်လုပ်ရေး အောင်မြင်နေမှုကို အစိုးရက လျစ်လျူရှုထားခဲ့သလို၊ ကျေးလက်ဒေသတွင်း ၀င်ငွေကွာဟမှုနှုန်း ကြီးထွား လာနေသည့် အကြောင်းကိုလည်း အစိုးရက မသိကျိုးကျွံနေခဲ့သည်။
အစိုးရ၏ စိုက်ပျိုးရေးမူဝါဒများသည် အကြီး အကျယ် ထောက်ပံ့မှုပေးထားပြီး တင်းကျပ်စွာ ထိန်းချုပ်ထားသည့် ဆန်စပါး စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွင်သာ အာရုံ ထားနေခဲ့သည်။ ဆန်များများထွက်မှသာ နိုင်ငံတည်ငြိမ်မှု၊ မိမိဘာသာ ဖူလုံ မှု ရရှိနိုင်မည်ဟု ထင်မြင်ယူဆထားကြပြီး ဤ စိုးရိမ်စိတ်လွန်ကဲမှုက စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၏ တခြားထုတ်လုပ်မှုများအပေါ် သက် ရောက်မှု ရှိစေခဲ့သည်။ တခြားပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဆောင်ရွက်စရာ ကိစ္စများကိုလည်း နှောင့်နှေးစေခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဤစာအုပ်တွင် စိတ်ဝင်စားဖွယ် လူတို့၏အကြောင်း ဖော်ပြထားချက်များ များစွာ မပါရှိပါ။ လူစိတ်ဝင်စားဖွယ် ဇာတ်လမ်း များ မပါရှိသလို၊ အတွင်းကျကျ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းလုပ်ထားသည်များလည်း မတွေ့ရပါ။
"ကျွန်းသစ်ခန်းဆီး နောက်ကွယ်၌" (Behind the Teak Curtain) ဟု အမည်ရသည့် အားဒစ် မောင်သောင်းမာန် (Ardeth Maung Thawnghmung) ၏ စပါးစိုက်လယ်သမားများနှင့် အစိုးရမူဝါဒများအကြောင်းစာအုပ်နှင့် (Ethnic Community Development Forum) မှ ယခုနှစ် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိခဲ့သည့် "အမိန့်အားဖြင့် ဘိုင်အိုဒီဇယ်ထုတ်လုပ်ခြင်း" (Biofuel by Decree) အမည်ရှိ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ လေ့လာတင်ပြထားသော အစီရင်ခံစာတွင်မူ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကြက်ဆူပင် အဓမ္မ စိုက်ခိုင်း နေသည်ကို တွေ့မြင်ကြရမည်ဖြစ်ပြီး ယှဉ်တွဲဖတ်ရှုသင့်သည့် စာအုပ်များ လည်း ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ စာဖတ်သူက အသေးစိတ် အချက်အလက်များ အလိုရှိပါက အိုကာမိုတို၏ စာအုပ်တွင် စာရင်းဇယား ၁၁၅ ခု ဖော်ပြထားပါသည်။ သုံးခွ မြို့နယ်တွင် လယ်ထွန်စက်ငှားရမ်းခမှသည် မြို့တွင်း ရွာသွန်းသည့် မိုးရေချိန်အထိ အားလုံး အသေးစိတ်ပါဝင်သည်။ တချို့သော စီးပွားရေး ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အခန်းများမှာ စာလေးပြီး ဖတ်ရန် အတော် အား ထုတ်ရ မည့် ကိစ္စဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ပညာရှင်တဦးအနေဖြင့် ပဲထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ ပညာရပ် အပိုင်းကိုသော် လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေး ကဏ္ဍအရသော်လည်းကောင်း သိရှိလေ့လာလိုပါက အသေးစိတ်လေ့လာနိုင်သောစာအုပ် ဖြစ်ပါသည်။
ယင်းလေ့လာတွေ့ရှိချက်များက နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအပြီး ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများစတင်ကြရ တော့မည့် ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသနှင့် ရန်ကုန်မြို့နှင့် အနီးဝန်းကျင်ဒေသများအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ မြန်မာ နိုင်ငံ၏ စားနပ်ရိက္ခာ အကြပ်အတည်း ပြဿနာအတွက်သော်လည်းကောင်း အဖြေရှာတွေ့ရန် မျှော်လင့်နိုင်ပါသည်။
ကုလသမဂ္ဂ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ (FAO) က သုံးခွမြို့နယ်အပါအ၀င် မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်ခဲ့ရသည့် မြို့နယ် (၃၀) တွင် ပုံမှန်အခြေအနေ ပြန်ရောက်ရန်အတွက် အထောက်အပံ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀ ကျော် လိုအပ်လိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငွေကြေးဖောင်းပွမှု ကြီးထွားနေပြီး ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပိုမိုဆိုးရွားလာသည်နှင့်အမျှ ယခု မုန်တိုင်းအပြီး ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများသည် အချိန်ကြာမြင့်စွာကပင် ဆိုင်းငံ့ထားခဲ့သည့် ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်း များနှင့် အတူယှဉ်တွဲ အကောင်အထည်ဖော်သွားမှသာ ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ သို့မှသာ ကျေးလက်နေ ပြည်သူများ အနေဖြင့် ပို၍ သာတူညီမျှရှိသည့် ဘ၀ကို ခံစားကြရမည် ဖြစ်ပါတော့သည်။
ဒေးဗစ် စကော့ မက်သီဆင် (DAVID SCOTT MATHIESON) ရေးသားသည့် Cultivating Inequality ကို ဆီလျော် အောင် ပြန်ဆိုဖော်ပြပါသည်။
ဒေးဗစ် စကော့ မက်သီဆင် သည် အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့အခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေးလေ့လာစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့ (HumanRights Watch) တွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အကြံပေးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းနေသူ ဖြစ်ပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့ ကမာရွတ်ရဲစခန်းအနီး ပစ္စည်းယူ လူသတ်မှု ဖြစ်ပွား
NEJ/၁၆ ဇူလိုင် ၂၀၀၈
ရန်ကုန်တိုင်း ကမာရွတ်မြို့နယ် အမှတ် (၈) ရပ်ကွက် လှည်းတန်းလမ်း တိုက်နံပါတ် (၁၀၃) အခန်း (A) မြေညီထပ်တွင် ပစ္စည်းယူ လူသတ်မှုတခု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
အခင်းဖြစ်ပွားသည့်နေရာမှာ ရန်ကုန်မြို့ ကမာရွတ်ရဲစခန်းအနီးရှိ ရွှေမူဆယ် အပ်ချုပ်လုပ်ငန်းနှင့် အထည်အလိပ် လက်လီလက္ကား အရောင်းဆိုင်တွင်ဖြစ်ပြီး သေဆုံးသူမှာ ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဒေါ်လှမြင့် အသက် (၅၆) နှစ်ဖြစ်သည်။
ယခုလ (၁၄) ရက် နံနက် (၉) နာရီခန့်တွင် ဆိုင်အလုပ်သမားများက ဆိုင်ကိုလာသည့်အခါ ဆိုင်မဖွင့်သေးဘဲ ရှိနေသည့်အတွက် အတွင်းသို့ ၀င်ရန် ဆိုင်အနီးအနားရှိ လူများကို ခေါ်၍ ဖွင့်ခဲ့ရာတွင် ဒေါ်လှမြင့်ကို လက်နောက်ပြန် ကြိုးတုတ်ကာ ပါးစပ်တွင် အ၀တ်စည်း နှောင်ရက် သားဖြင့် သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရကြောင်း ဆိုင်အနီးနားမှ မျက်မြင်တဦးက ပြောသည်။
တရုတ်လုပ် ဗီစီဒီစက်တလုံး၊ ငွေ (၁) သိန်း၊ ဆွဲကြိုး (၁) ကျပ်သား တကုံး၊ အ၀တ်အထည်များ ပျောက်ဆုံးသွားကြောင်း သေဆုံးသူနှင့် ဆွေမျိုးတော်စပ်သူတဦးက ထွက်ဆိုကြောင်း ရဲက စစ်ချက်ရရှိသည်ဟု ကမာရွတ်ရဲစခန်းမှ အမှုလိုက် ဒု- ရဲအုပ်ဖြစ်သူက ပြောသည်။
အဆိုပါအခန်းတွင် ဒေါ်လှမြင့်သည် တယောက်တည်း အိပ်ကြောင်း၊ အမှုကို (ပ) ၁၅၄/ ၂၀၀၈ ပုဒ်မ ၃၀၂/ ၃၉၄ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း၊ တရားခံကို ယခုထိ သဲလွန်စ မရသေးကြောင်း သိရသည်။
အခင်းဖြစ်ပွားရာ နေအိမ်အနီး နေထိုင်သူတဦးက “သေမှုသေခင်း ဖြစ်တဲ့နေရာဟာ လူစည်ကား ရာ လှည်းတန်းလမ်းမ ဖြစ်ပြီး လှည့်ကင်းတွေ ညစဉ်ကင်းလှည့်နေတဲ့ နေရာလေ။ တိုက်ခန်းကို လူဝင်သတ်ဖြတ်သွားတဲ့ကိစ္စက အတွင်းလူ ဒါမှမဟုတ် ရပ်ကွက်က အာဏာပိုင်အချို့ ပါဝင်နိုင်တယ်” ဟု ပြောသည်။
လူသတ်မှု ဖြစ်ပွားရာနေရာမှာ လှည်းတန်းကျောင်းရှေ့မှတ်တိုင် အရှေ့နားတွင် ရှိပြီး ရဲစခန်းနှင့် ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင် တမှတ်တိုင်အကွာခန့်သာ ဝေးသည် ရန်ကုန်မြို့တွင် မုန်တိုင်းမတိုက်မီ ကတည်းက စားဝတ်နေရေး ကျပ်တည်းမှု၊ ငွေဖောင်းပွမှု စသည်တို့ကြောင့် ရာဇ၀တ်မှုများ မကြုံစဘူး များနေရာ မုန်တိုင်းလွန်ကာလတွင် ယခုကဲ့သို့ လူသတ်မှုများပါ တိုးလာခြင်းဖြစ်သည်။
မကြာခင်ကလည်း ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် တော်ခရမ်းရွာတွင် ဘဲဥ အလုံး (၅၀) အတွက် ဓားပြ တိုက်သွားသည်မှာ ပြည်သူများ မုန်တိုင်းလွန်ကာလ စားဝတ်နေရေး ကျပ်တည်းမှုကို ပြနေ သည်ဟု ရန်ကုန်မြို့ခံတဦးက ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် မတ်လ (၃) ရက် ညပိုင်း၌လည်း အဆိုပါ မာရွတ်မြို့နယ် အမှတ် (၉) ရပ်ကွက် စိမ်းလဲ့ ကန်သာလမ်းတွင် နေထိုင်သူ ဦးချာလီ၊ ဒေါ်စန်းစန်းမြင့်၊ သမီးတူမများဖြစ်သည့် မမြစန္ဒာ၊ မနှင်း ပွင့်အေးနှင့် အိမ်ဖော် မအယ်ဖောတို့ (၅) ဦးအား ဦးခေါင်းကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်ခဲ့သည့် လူသတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တရားခံကို ယခုတိုင် ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။
နေပြည်တော် ပြည်ထဲရေး ရဲအရာရှိတဦးက အဆိုပါ (၅) လောင်းပြိုင် လူသတ်မှုကို ပြီးခဲ့သည့် မေလ နောက်ဆုံးထား ဖော်ထုတ်မည်ဟု ပြောကြားခဲ့ဖူးသည်။ ။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/16/20080အကြံပြုခြင်း